CopyPaste Pro Mac - # 1 प्रतिलिपि टाँस मल्टि क्लिप प्रबन्धक | बेर आश्चर्यजनक%
CopyPaste को साथ तपाईंको कम्प्युटरमा सब भन्दा शक्तिशाली सुविधा प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्। त्यो सुविधा प्रतिलिपि र टाँस्नुहोस् जुन प्रत्येक कम्प्युटर प्रयोगकर्ताद्वारा दर्जनौं पटक प्रयोग गरिन्छ र त्यो मात्र एक क्लिपबोर्डको साथ। कपिपास्ट पहिलो हो र बहु ​​क्लिपबोर्ड प्रदर्शन, अभिलेख राख्ने र सम्पादन गर्नेका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय बहु क्लिपबोर्ड उपयोगिता हो। तपाईंको प्रतिलिपिहरूको ईतिहासमा वा अधिक स्थायी क्लिप अभिलेखमा कुनै क्लिप हेर्नुहोस् र सम्पादन गर्नुहोस्। रिस्टार्टहरू मार्फत बहु क्लिपबोर्डहरू बचत गर्नुहोस्। अविश्वसनीय उपयोगी। सबै म्याक प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक महान समय बचतकर्ता, र जीवन बचतकर्ता।
"म कपिपास्ट बिना कम्प्युटरको कल्पना गर्न सक्दिन" - सर जेम्स गाल्वे, विश्व प्रख्यात Flautist
"कपिपास्टले मेरो जीवन यति सजिलो बनाएको छ र म यो बिना कम्प्युटरको कल्पना पनि गर्न सक्दिन। यदि तपाईं किबोर्डमा धेरै लेख्दै हुनुहुन्छ र काटेर पेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कामको लागि सही उपकरण हो। सबै प्रकारका चीजहरू भण्डार गर्नुहोस् जस्तै कि हेडर र ठेगानाहरू कुञ्जीको स्पर्शमा सम्मिलित गर्न। प्रयोग गर्न धेरै सरल। "
सर जेम्स गाल्वे, विश्व प्रख्यात Flautist
यो (कपिपास्ट) अनुप्रयोग १००% अमेजिंग हो र म यसको असंख्य सुविधाहरू हजारौं पटक प्रयोग गर्दछु - शाब्दिक रूपमा। यो एक समय-बचतकर्ता, बढेको कार्य-प्रवाह दक्षता, र अधिक हो।
"कपिपास्ट प्रो: पावर ओएस एक्स प्रयोगकर्ताको लागि पावर क्लिपबोर्ड। छिटो र अझ बढी कुशल सम्पादन चाहान्नुहुन्छ? ओएस एक्सको लागि तपाईलाई कपिपास्ट प्रो चाहिन्छ। तपाईले दोहोर्याउने सम्पादनहरू गर्नुपर्दा गतिमा भएको सुधार आश्चर्यजनक छ। यो निश्चित रूपमा पावर उपकरण हो। पावर प्रयोगकर्ताका लागि र out मध्ये G को गियरहेड रेटिंग प्राप्त गर्दछ। "
मार्क गिब्स, गियरहेडसञ्जाल संसार
मेरो मनपर्ने म्याक सुविधाहरू मध्ये एक हेर्नुहोस्। यसलाई copyPaste Pro भनिन्छ। यो बहु क्लिपबोर्ड प्रबन्धक हो। यसको मतलव तपाईले काट्ने वा प्रतिलिपि गर्ने कुनै पनि पुस्तकालयमा भण्डार हुन्छ त्यसैले यसलाई फेला पार्न र फेरि प्रतिलिपि नगरी पछि यो टाँस्न सकिन्छ। त्यो एक ठूलो समय बचतकर्ता हो।
तेरा थॉमस ओ ब्रायनतेरा वार्ता
Ich muss mich eigentlich quick सेलबस्ट - मिच सेल्ट बेस्ट वुन्डर्न, dass Iich diese सफ्टवेयर noch nicht eher gefunden und im Einsatz hatte। Mittlerweile kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, wie ein Mac ohne diese App „Funktionieren“ soll। साथै ich gehe jetzt mal von meinem “Arbeits-Mac“ aus, एक dem ich den ganzen Tag Tag Und Und Erst da Spiel die सफ्टवेयर ihren नत्जेन धेरै समृद्ध। म गेजेन्जुग डजू हब आइच नो ईन एटवास एल्टेरेस म्याकबुक प्रो अण्ड डा फेल्ट मिट डाईट सफ्टवेयर haberhaupt nicht। Seltsam nicht। 😉Aber Wie in der Überschrift schon Angedeutet: „copyPaste Pro ist sosas -shnliches wie eine TimeMachine for Zwischenablage।" Ich glaube dieser Satz beschreibt Kurz And Bündig, थियो मृत्यु सॉफ्टवेयर सफ्टवेयर।
मार्कस ओस्टमेयर, ब्लगरostermeier.net
"त्यहाँ त्यस्तो दिन आउँदैन जुन म कपि पेस्टको प्रयोग गर्दिन। एक शानदार उपयोगिताका लागि पुन: धन्यबाद।"
"कपिपास्ट प्रो एक धेरै लचिलो अनुप्रयोगको उदाहरण हो किनकि अन्य उत्पादकता अनुप्रयोगहरूको विपरित, यसको यति धेरै बिभिन्न प्रयोगहरू छन्। विकासकर्ताहरूले त्यस्ता आधारभूत कम्प्युटर प्रकार्यमा सुधार गरेका छन् र नतिजा प्रतिभाशाली छन्। प्रतिलिपिपास्ट प्रोको विकासकर्ता, प्लम आश्चर्यजनक, यसको अन्य कार्यक्रमहरूमा यसको प्रदर्शन देखिन्छ - साधारण प्रणाली प्रोग्रामहरू लिने र उनीहरूलाई ओफ र अतिरिक्त सुविधाहरूको पूर्ण पम्पिंग। प्रतिलिपि पेस्ट प्रोले मलाई वास्तवमै समय बचत गर्न मद्दत गरेको छ र यो प्रयोग गर्न पाउँदा आनन्दको कुरा छ - सरल र सुविधा सम्पन्न। केही मानिसहरूले सोच्न सक्छन्, जहाँसम्म, कार्यक्रमको for 30 को खुद्रा मूल्य केवल एक साधारण उपयोगितामा खर्च गर्न अलि धेरै छ तर तपाइँले फेला पार्नुहुनेछ कि एक पटक तपाइँले यो प्राप्त गर्नुभए पछि, तपाइँले यस बिना नै कसरी गर्नुभयो भनेर आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। "
जेम्स कुल AppStorm समीक्षा
कपिपास्ट प्रो म्याकको लागि उत्तम क्लिपबोर्ड अनुप्रयोग। CopyPaste Pro è l'utility più flessibileepotente tra quelle disposizione sul Merato per fare anche l'impossibile Con il Iil copyiaeincolla: gestisce clip बहु, crea आर्चीव डि क्लिप डि टेस्टो anche editabili, fornesce पहुँच agli elenchi con palette flotta il trascinamento ডিরেক্টtaamente da safari, non perde la memoria neppure dopo il rivvio del Mac।
म्यासिटीइटालियन म्याक ब्लग
"प्रतिलिपिपास्ट प्रो शायद सबैभन्दा उपयोगी उपकरण हो जुन तपाईंलाई कहिले पनि थाहा भएन तपाईंलाई आवश्यक छ। यसको अपरिहार्य सुविधाहरू साँच्चिकै तपाईंको दैनिक कामको उत्पादकता बढाउँछन्।"
“यदि तपाईं आफ्नो म्याकको लागि मात्र एउटा उत्पादकता उपकरण पाउन सक्नुहुन्थ्यो भने कपिपास्ट प्रो छनौट गर्नुहोस्। प्रतिलिपिस्टे प्रो केवल पृष्ठभूमिमा विराजमान छ, प्रयोग हुनको लागि कुर्दै, विश्वासपूर्वक स collecting्कलन र भण्डार गरीएको जुनसुकै तपाईंले प्रतिलिपि गरेको वा काटिएको जे होस्, आइटमहरू जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ टाँस्न तयार हुनुहुन्छ। पावर सुविधाहरूको लामो सूचीको बावजुद, आधारभूतहरू तपाईंलाई सुरू गर्नका लागि पर्याप्त छन् र यो सेटअप गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ। कसैले तपाईंको क्लिपबोर्डको लागि प्रतिलिपिपास्ट प्रो समय मेशीन भनिन्छ। जबकि यो समय मेशीन जस्तो देखिँदैन, यसले क्याप्चर गर्दछ र भण्डार गर्दछ धेरै धेरै तपाईले आफ्नो म्याकमा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ र भविष्यमा कुनै पनि समयमा पेस्ट हुन प्रदान गर्दछ। "
ज्याक डी मिलरMac360
"तपाईको म्याकको लागि आवश्यक उपयोगिता। प्रत्येक पटक तपाईले अरू कतै टाँस्न केहि प्रतिलिपि गर्नु भयो भने तपाईले कपि गर्नु भएको वस्तु क्लिपबोर्डमा राखिएको छ। म्याक ओएस एक्स भित्र क्लिपबोर्डको समस्या भनेको यो हो कि एक पटकमा केवल एक वस्तुलाई ह्यान्डल गर्नका लागि निर्माण गरिएको हो: wasn ' t यो उपयोगी हुन सक्छ यदि तपाईं त्यहाँ धेरै वस्तुहरू पप गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईं ती सबै समान कागजातमा वा अन्य प्रोजेक्ट फाईलमा अनुप्रयोगहरू बीच अदला-बदली पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ? प्रतिलिपिपास्ट प्रोको साथ, तपाईं सक्नुहुन्छ। '
सर जेम्स गाल्वे,विश्व प्रख्यात Flautist
"जहिले पनि शेयरवेयरको एक टुक्रा आउँदछ जसले हामीलाई सोच्दछ कि हामी यो बिना कसरी बाँचेका थियौं - त्यस्तै कपपीस्टे-एक्स हो, स्टेरॉइड्समा टर्बो क्लिपबोर्ड युटिलिटी।"
निको कोकुउभनिसMacAddict पत्रिका
पहिलो (१ 1997 XNUMX in मा जारी) र सबैभन्दा लोकप्रिय बहु क्लिपबोर्ड उपयोगिता प्रदर्शन गर्न, संग्रह र क्लिपबोर्ड सम्पादन गर्न।
क्लिपबोर्डका लागि समय मेशीन।
तपाईंको स्थायी क्लिप अभिलेखमा प्रतिलिपि वा भण्डार प्रतिलिपिहरूको इतिहासमा कुनै क्लिप सम्पादन गर्नुहोस्। रिस्टार्टहरू मार्फत बहु क्लिपबोर्डहरू बचत गर्नुहोस्। बढि उपयोगी, समय बचतकर्ता, सबै म्याक प्रयोगकर्ताहरूको लागि जीवन रक्षक। सबै भन्दा राम्रो क्लिपबोर्ड अनुप्रयोग।
कपिपास्ट मूल हो, एक मात्र पुरस्कार बहुविध क्लिपबोर्ड सम्पादक र अभिलेखालय उपयोगिता।
प्रतिलिपिपास्ट शुरुवातकर्ताहरू, लेखकहरू, सम्पादकहरू, ग्राफिक डिजाइनरहरू, वकिलहरू, विद्यार्थीहरू, गृह व्यवसायहरू, डिजिटल फोटोग्राफरहरू, जो कोहीले क्लिपबोर्ड प्रयोग गर्दछका लागि आवश्यक छ।
क्लिपबोर्ड सामग्री क्लिपबोर्ड सामग्री र अन्य धेरै प्रकारका डेटाको लागि डिजिटल हब हो। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, समय बचत गर्दछ र तपाईंलाई कम गर्न र अधिक हासिल गर्न अनुमति दिन्छ। यसलाई नि: शुल्क प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् र क्लिपबोर्ड प्रबन्धक कत्तिको आवश्यक छ हेर्नुहोस्।
एक समय अपरेटिंग सिस्टमसँग कुनै अन्तर्क्रिया संचार थिएन। त्यसपछि म्याकको साथ आयो र यसको अविश्वसनीय सुविधाहरू मध्ये एक क्लिपबोर्ड हो जसले तपाईंलाई एक अनुप्रयोगबाट एक वस्तु प्रतिलिपि गर्न अनुमति दिन्थ्यो त्यसपछि अर्को खोल्नुहोस् र टाँस्नुहोस्। त्यो १ 1985 XNUMX मा क्रान्तिकारी थियो तर अब यो अर्को शताब्दी हो र म्याक ओएसमा प्रतिलिपि गर्ने र टाँस्ने कुनै पनि विकास भएको छैन - आधुनिक ओएस एक्समा पनि। तपाईले कति पटक आफैंमा एक वस्तुको प्रतिलिपि बनाउँदै अनुप्रयोग बीचमा बदल्दै फेला पारेको छ? एक पटक, तपाईले एक पटकमा दुई भन्दा बढी आईटमहरू मात्र नक्कल गर्न सक्नुहुनेछ?
कपिपास्ट प्रो एक अनुप्रयोग हो जुन मैले INDISPENSABLE लाई मेरो कार्यप्रवाहमा सम्झन्छु। जुलियन मिलर एकदम उत्तरदायी र सहयोगी छ! म दृढताका साथ यो अनुप्रयोग र प्लम आश्चर्यजनक सिफारिश गर्दछु!
जिम Terrinoniमकअपडेट, 9/7 / २०
CopyPaste Pro। यस अनुप्रयोगले पृष्ठभूमिमा चुपचाप काम गर्दछ, सधैं बोलाउनको लागि तयार, र म यसलाई दैनिक प्रयोग गर्दछु। यसले मलाई धेरै समय बचत गर्छ। आफैलाई एउटा पक्ष दिनुहोस् र यो आवश्यक अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
मार्सेल डुफ्रेस्नेMause समीक्षा, मे २ 28, २०२०
"तपाईंको" साधारण "अनुप्रयोगले नाप्ने मात्राले मेरो लागि उत्पादकत्व वृद्धि गर्दछ। संगीतकारको रूपमा, म तत्काल र बढ्दो विकल्पहरूले अधिकार पाएको महसुस गर्दछु। लेखकको रूपमा, म बहुविध सम्पादनहरू, केन्द्रित परिणामहरू देख्न सक्छु।"
केपीपास्ट भित्र विभिन्न सुविधाहरूका लागि केहि शर्तहरू र अभिव्यक्तिहरू प्रयोग गरिन्छ। यो तिनीहरूलाई सम्झन र अर्थ बुझ्न सहयोगी हुन सक्छ।
एक प्रतिलिपि गरिएको वस्तु हो, जस्तै पाठको स्निपेट
प्रणाली क्लिपबोर्ड हो
क्लिपहरूको लागि कन्टेनर हो
स्ट्याकमा अस्थायी क्लिपहरूको लागि कन्टेनर हो
फाईलमा क्लिपको संग्रह हो
क्लिपहरू हेर्न र परिवर्तन गर्न प्रयोग गरियो
क्लिपबोर्ड मार्फत प्रत्येक प्रोग्राममा काम गर्ने उपकरणहरू हुन्
MacUpdate द्वारा भिडियो समीक्षा
म्याक ओएस १०.१10.14, मोजाभमा स्थापना
CopyPaste - स्थापना, क्लिप ईतिहास र क्लिप संग्रह
CopyPaste - क्लिप ब्राउजर र क्लिप प्यालेट
CopyPaste - उपकरणहरू
प्रयोगकर्ता र समीक्षकहरू copyPaste को बारे मा रेभ
पहिले (१ 1997 XNUMX)) प्रारम्भिक बहु-क्लिपबोर्ड उपकरण कपप्यास्टको समीक्षा
कपिपास्ट: एक स्कोफर छैन
CopyPaste को भावना सराहनीय छ, र - एकचोटी तपाईले यसको उपयोगिताको अनुभव गर्नुभयो भने - तपाईं यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्न किन यो म्याक ओएस प्रणालीमा वर्षौंसम्म निर्माण गरिएको छैन।
- म्याट न्युबर्ग, TidBits मा समीक्षा, २/2/१ 3।।
म्याकउजरले कपीपेस्ट प्रदान गर्यो
- पृष्ठभूमिमा साप्ताहिक अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्दछ र केहि नयाँ हुँदा मात्र तपाईंलाई थाहा दिन्छ। अब प्रत्येक स्टार्टअपमा जाँच गर्दैन
- मोन्टेरीको लागि निश्चित प्रक्षेपणमा लगइन गर्नुहोस्
- अन्य साना सुधारहरू
- http बाट https मा अद्यावधिक म्यानुअल
- 6.7.92 को लागि समाधान गर्नुहोस् जसले केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि टाँस्ने समस्या सिर्जना गर्यो।
- मोन्टेरी म्याक ओएस १२ मा राम्रो काम गर्दछ
- दुबै Adobe indesign र Apple keynote लाई बहिष्कार गर्न प्रिफिक्स फिक्स गर्दछ
- अनुप्रयोग notarized
- अनुप्रयोग notarization जोड्नुहोस्। स्याउबाट नयाँ सुरक्षा सुविधा।
- आदेश सी र सी तय गरियो। चयन गरिएको पाठको लागि यसले क्लिप ० मा प्रतिलिपि गर्दैन तर यसले क्लिपलाई संग्रहमा पहिलो उपलब्ध स्लटमा राख्दछ। बढी म्यानुअल मा छ।
- कमाण्ड सी र कमान्ड v काम
- कमाण्ड विकल्प कन्ट्रोल सीले पहिलेको जस्तो स p्ग्रह प्यालेट खोल्यो
- कमाण्ड विकल्प कन्ट्रोल v ले पहिलेको जस्तो इतिहास प्यालेट खोल्छ
- कमान्ड सी (र नम्बर वा अक्षर) पहिलेको रूपमा कि अभिलेख स्लटमा प्रतिलिपि
- आदेश v (र नम्बर वा अक्षर) पहिले जस्तै अभिलेख स्लटबाट टाँस्नुहोस्।
- क्लिकक्लिप (पाठ चयन गर्नुहोस् र अनुकूलन समयको मात्राको लागि होल्ड गर्नुहोस्) पहिले जस्तो काम गर्दछ
- म्याक ओएस १०.१10.14.4..XNUMX असंगतिको लागि ठीक गर्नुहोस् जसले आदेश सी तोड्यो।
- अनुप्रयोग फोल्डरमा फोल्डरहरू भित्र सबै अनुप्रयोगहरू र अनुप्रयोगहरू देखाउनेछ र बहिष्करण सूचीमा चयन गर्न सकिन्छ।
- बहिष्कार वर्णमालामा छ र शीर्षमा तपाईं क्रमबद्ध गर्न वा तल क्रमबद्ध गर्न क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
- 'बहिष्करण सूची' थपियो त्यसैले यो सबै भाषाको लागि उपलब्ध छ।
- नयाँ प्रिफ 'अपवर्जन सूची' को लागी अपडेट गरिएको म्यानुअल
- प्रत्येक प्रीफ पेन को सबै स्क्रीनशट अपडेट
सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको उत्कृष्ट प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद!
- प्राथमिकतामा ट्याबमा 'बहिष्करण सूची' थपियो। अनुप्रयोगलाई कपिपास्टका साथ प्रयोगबाट बाहिर राख्नको लागि लामो प्रतिक्षा योग्य क्षमता। यहाँ केहि उदाहरणहरु छन्। एप्पलको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन एप्पल क्लिपबोर्ड निर्देशनहरू अनुसरण गर्दैन। पासवर्ड व्यवस्थापकहरूको साथ पनि। एरिक क्रौंचलाई ठूलो धन्यवाद, सबैभन्दा भर्खरको व्यक्तिहरूको लामो लाइनमा जुन यो सुविधा थप्न सिफारिस गर्दछ।
- अधिक अपडेटहरू अपेक्षा गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग एप्लिकेसन वा म्यानुअलका लागि सुझावहरू छन् भने हामीलाई जानकारी दिनुहोस्
- यदि तपाईंले थप २ वर्ष पहिले प्रतिलिपिस्टेट किन्नुभयो भने, हामीसँग सम्पर्क गरेर थप २ बर्ष बर्षको अपडेट र समर्थनमा छुट पाउन सक्नुहुन्छ।
- प्राथमिकतामा छनौट गरिएको अन्तिम प्यानल सम्झन्छ। यस बग सबमिट गर्नका लागि गब्रिएल डोराडोलाई धन्यबाद।
- अधिक स्थितिमा प्रतिलिपि आदेशमा सुधार गर्दछ।
- पछिल्लो एक्सकोडसँग कम्पाइल
- copyypaste म्याक १०.१100 मा १००% काम गर्दछ
- परिवर्तन भयो केही संवादहरू अँध्यारो मोडमा राम्रोसँग काम गर्दछन्।
यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ भने हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्।
कपिपास्ट प्रयोगकर्ताहरू, हामी तपाईंको प्रतिक्रियाको आनन्द लिन्छौं। अब समय आएको छ! यदि तपाईंसँग सुझावहरू, मुद्दाहरू वा म्यानुअल परिवर्तनहरू छन्, कृपया एक सूची बनाउनुहोस् र तिनीहरूलाई भित्र पठाउनुहोस्। हामी सबै गर्न सक्नुहुन्न तर the ०% प्रयोगकर्ताहरूलाई फाइदा हुने वस्तुहरू गर्न कोशिस गर्नेछौं।
- [फिक्स्ड] स्प्लैश स्क्रिन स्टार्टअपमा पर्दा
- [फिक्स्ड] अब सुरक्षा र गोपनीयता मा copyypaste जोड्न काम गर्दछ: पहुँच प्यानल। प्रयोगकर्तालाई अझै पहुँच प्रदान गर्न आवश्यक छ।
- [स्थिर] पुरानो कोडको लागि कम्पाइल मुद्दा फिक्स गरियो।
- अब म्याक ओएस १०.१10.14 को लागि मोजावेले सुरक्षा र गोपनीयतामा स्वचालित रूपमा प्रतिलिपि पेस्ट थप्छ: पहुँच प्यानल ताकि प्रयोगकर्ताहरूले क्लिपबोर्ड प्रयोग गर्न कोपाइप्यास्ट अनुमति प्रदान गर्न सक्दछ। प्रयोगकर्ताहरूलाई अझै प्यानल अनलक गर्न आवश्यक छ र अनुमति प्रदान गर्न कोपीपास्ट जाँच गर्नुहोस्।
कृपया यस संस्करणको म्यानुअल स्थापना गर्नुहोस्। तपाईंसँग भएको संस्करण मेटाउनुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको एप्लिकेसन फोल्डरमा राख्नुहोस्।
- भविष्यमा प्रयोगको लागि निश्चित गरिएको अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्।
- छोटो यूआरएल अब फिक्स गरिएको थियो।
- डार्कमोड अब काम गर्दछ
- अधिक अद्यावधिकहरू आउँदै ...
- धेरै परिवर्तनहरू र धेरै कार्यहरू हालसालको म्याक ओएस परिवर्तनहरू र एप्पल सुरक्षा र हस्ताक्षर परिवर्तनहरूसहितको मितिमा अपलाई ल्याउनको लागि धेरै काम। सबैको धैर्यताको लागि धन्यवाद। यदि तपाइँ केहि मुद्दा फेला पार्नुहोस् कृपया हामीलाई बताउनुहोस्।
- हो, यो संस्करण म्याक ओएस १०..10.6 - १०.१२ को लागि काम गर्दछ
- डाटा प्रकारहरू स्वीकार गर्न आन्तरिक परिवर्तनहरू।
- एप्पल नम्बर, कीनोट र पृष्ठहरूमा अतिरिक्त फिर्ताको पेस्ट गर्ने फिक्सहरू।
- नयाँ "शब्द गणना र फ्रिक्वेन्सी" उपकरण।
- प्यालेटहरू बीचमा तान्नुहोस् र छोड्नुहोस्।
- दुर्घटनामा डाटा हराउनबाट रोक्नको लागि संग्रह क्लिपहरू तुरून्त सुरक्षित हुन्छन्।
- copyPaste अब हस्ताक्षर गरिएको छ। हो, अन्तमा! एप्पलको पछिल्लो सेकुरिटी हिसाब गर्न भालु थियो तर यो अब भयो। यसको मतलब यो पहिलो उद्घाटनमा लामो समय देखि भन्ने छैन "के तपाइँ एक अज्ञात विकासकर्ता द्वारा यस अनुप्रयोग खोल्न चाहानुहुन्छ"। अब हामी अपडेटमा काम गर्दै फर्कनेछौं र कपिपास्ट सुधार गर्नेछौं। सबैको धैर्यताको लागि धन्यवाद।
- कम्पाईल गरिएको र पछिल्लो Xcode with को साथ अनुकूलित
- अब कोडमा हस्ताक्षर गरियो।
- बीन अब यसका लेखकद्वारा अपडेट गरिएको छैन त्यसैले हामीले यसलाई हटायौं र यसलाई टेक्स्ट एडिट प्रयोग गरेर बदल्‍यौं
- एक्सकोडको नयाँ संस्करणमा अपडेट गरियो।
[फिक्स] केहि स्थितिहरूमा एमएस शब्दसँग काम गर्ने बग फिक्स गरियो।
[नयाँ] १०.10.8 को लागि संकलित
[अर्को] अर्को संस्करणमा हस्ताक्षर हुनेछ। १०.10.8 मा सुरक्षा र गोपनीयता सेट गर्नुहोस्: कहिँबाट पनि डाउनलोड गरिएका अनुप्रयोगहरूलाई अनुमति दिन सामान्य।
[Mod] इंटेल मात्र
[Mod] अनुप्रयोग अपडेटहरूको लागि प्राय: जाँच गर्दछ परिवर्तन गर्नुहोस्। कृपया यो संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस् यदि यसको साधारण परिवर्तनले यसले हाम्रो सर्भरलाई अपडेटसँग राम्रोसँग मद्दत गर्दछ।
[नयाँ] नयाँ प्रतिमा
[नयाँ] नयाँ स्प्लैश स्क्रीन
[Mod] जब तपाईं खाली संग्रह प्यालेटमा क्लिक गर्नुहुन्छ, अब ड्रर विन्डो खुल्छ र बिभिन्न संग्रह चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
[अपडेट गरिएको] पछिल्लो xcode साथ संकलित। धेरै सुधार र अप्टिमाइजेसनहरू। म्यानुअल परिवर्तन।
[नयाँ] प्राथमिकतामा केही जोड्नुहोस् नयाँ बटनहरू जुन फाइन्डर प्रिफेहरू र अन्य फाइलहरू कोपिपस्टे प्रयोग गर्दछ देखाउँदछ।
[अद्यावधिक गरिएको] बीनको नयाँ संस्करण समावेश गरियो (कोपाइपेस्टमा वर्ड प्रोसेसर)। जेम्स हूवर बिनका सिर्जनाकर्तालाई धन्यवाद।
[Mod] यो अब युनिभर्सल /२/32। इंटेल र पीपीसी १०..64 र माथि छ
[नयाँ] किबोर्ड प्रतिलिपिहरूको लागि प्रतिक्रिया ध्वनी खोल्नको लागि एक नयाँ प्राथमिकता विकल्प
[Mod] माईक्रोसफ्ट वर्डबाट क्लिपहरू अब OLE र अन्य लिंक जानकारी हटाउनका लागि हटाइयो।
[Mod] प्यालेटको उद्घाटन डिस्प्ले जब तपाइँ कमांड-ctrl-विकल्प-v प्रयोग गर्नुहुन्छ (वा सी) रद्दीटोकरी बटनहरू सुरूमा देखाउँदैन जुन डिस्टर्ब थियो।
[Mod] भर्खरको बीन संस्करण २.2.9.6.। बिटा समावेश गरिएको छ।
[थप्नुहोस्] अब पूर्ण रूपमा bit 64 बिट
[Mod] १०..10.5 र उच्चको लागि। यस संस्करणले बाघ म्याक ओएस १०..10.4 मा काम गर्दैन। copypaste 3.0 १०..10.4 को लागि अन्तिम संस्करण हो।
[Mod] फ्रान्सेली स्थानीयकरण सुधार भयो
[थप्नुहोस्] प्रतिलिपिपास्ट प्रो मालिकहरूका लागि अर्को प्रमुख अपडेट निःशुल्क।
[थप्नुहोस्] नयाँ क्लिप ढाँचा।
[थप्नुहोस्] ईतिहास र अभिलेखहरूका लागि क्लिप्स सुविधा क्लिप सुविधा। कुनै क्लिपमा केहि पनि फेला पार्नुहोस्।
[थप्नुहोस्] क्लिप रभोलभर सुविधा थपियो। यो सुविधा copyPaste को धेरै पुरानो संस्करणमा अवस्थित थियो। प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई अनुरोध गरे त्यसैले हामी यसलाई फेरि लागू गर्यौं। यो कसरी कार्य गर्दछ: क्लिप रिभल्भरलाई प्राथमिकतामा खोल्नुहोस् र त्यसपछि आदेश-विकल्प-v पेस्ट गर्दछ र अन्तिम क्लिपबोर्ड खाली गर्दछ। यो प्राथमिकतामा सेट गर्न सकिन्छ।
[थप्नुहोस्] अन्तिम प्रयोग गरिएको क्लिपको प्रतिलिपि या त प्रतिलिपि गरिएको वा टाँस्दा ईतिहास स्ट्याकको शीर्षमा हुनसक्दछ, त्यसैले तपाईं यसलाई बारम्बार टाँस्न सक्नुहुन्छ। यो प्राथमिकतामा सेट गर्न सकिन्छ।
[Mod] पूर्वावलोकन दराजसँग एक नयाँ बटन मेनू छ जसले क्लिपबोर्डमा सबै बिभिन्न डाटा प्रकारहरू देखाउँदछ। यदि तपाईं कुनै डाटा प्रकारहरू चयन गर्नुहुन्छ भने यस प्रकारको डाटा ईतिहासको शीर्षमा नयाँ क्लिप सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ। जानकारीको लागि मात्र प्रदान गरिएको।
[फिक्स] क्लिपबाट इ-मेल ठेगानाहरूको निकासी विस्तारित।
[फिक्स] ईतिहास क्लिपहरू संग्रहमा बचत गर्दा बग फिक्स गर्दछ जुन सीपी क्र्यास भयो।
[Mod] अब पेस्ट मेनूबाट क्लिप चयन गर्दा नियन्त्रण कुञ्जी समात्दै मुख्य मेनूबाट एकल क्लिप मेटाउन सम्भव छ। मेटाउँदै दुबै ईतिहास र संग्रह क्लिपका लागि काम गर्दछ।
[फिक्स] २.2.3 मा नयाँ आन्तरिक डाटाबेस संरचना परिवर्तन भए पछि ड्र्याग र ड्रप र हटकीहरूको असाइनमेन्टको साथ एक समस्या आएको थियो। दुबै अब स्थिर छन्।
[फिक्स] यस संस्करणले २.2.3 मा बग फिक्स गर्दछ जहाँ अभिलेखमा एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्डको सामान्य कार्य रोक्दछ।
[Mod] एक नयाँ पुनर्लेखन डाटाबेस ढाँचा जो भविष्यका संस्करणहरूमा सुविधाहरूको आधार हुनेछ।
[मोड] पुरानो म्याक ओएस १०..10.4मा ती लागि राम्रो काम गर्दछ
[फिक्स] क्लिप प्यालेटमा कुनै एक प्रतिमामा डबल क्लिकमा सम्पादक अब गल्तीले खोल्दैन।
[फिक्स] स्क्रिन कन्फिगरेसन परिवर्तन गर्दा आईकन समस्या ठीक गर्दछ।
[फिक्स] माइनर बग फिक्सहरू
[Mod] म्यानुअल को नयाँ संस्करण मा लिंक।
[फिक्स] यस संस्करणले संग्रह क्लिप क्रमबद्ध गर्न केही समस्याहरू ठीक गर्दछ।
धेरै चाँडै आउँदैछ ....
[थप्नुहोस्] प्यालेटमा क्लिपको फन्ट साइज समायोजन गर्न यस संस्करणसँग नयाँ प्राथमिकता विकल्पहरू छन्। पूर्वनिर्धारित ११ पोइन्ट हो। मान्य दायरा अब 11 देखि २ points पोइन्टमा छ। तपाईं प्राथमिकताहरू खोल्न सक्नुहुनेछ र यदि प्यालेट दृश्यमान छ भने, तपाईं तुरून्त परिणाम देख्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं नयाँ आकार ट्याब वा फिर्ताको साथ पुष्टि गर्नुहुन्छ।
[मोड] बीनको नवीनतम संस्करण थपियो (कोपीपास्टेटमा वर्ड प्रोसेसर) जसले बीनको म्याक ओएस १०..10.6 सँग केही मुद्दाहरू फिक्स गर्दछ। बिनका लेखकले गरेका परिवर्तनहरूका कारण पछि बीनको भर्खरको संस्करण प्रयोग गरेर नयाँ कोपाइपस्ट गर्नु सजिलो हुनेछ।
[थप्नुहोस्] क्लिपहरूको नाम बदल्न अनुमति दिन्छ। प्यालेटमा तपाईं क्लिप क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ पूर्वावलोकनको साथ ड्रयर खोल्न र यसको नाम पाठ फिल्डमा परिवर्तन गर्न।
[फिक्स] स्पार्कल अपडेट फिक्स गरियो।
[फिक्स] समस्या, कि copyPaste डक मा रहन्छ प्राथमिकता सेटिंग्स को परवाह नगरी।
[Mod] जापानीको लागि अनुवाद थपियो
[नयाँ] अभिलेख र ईतिहासको लागि फ्लोटिंग आइकनहरूलाई असक्षम / असक्षम गर्नका लागि प्राथमिकता विकल्प थपियो।
[फिक्स] ले गलत टाँस्ने समस्याको समाधान गर्यो (माइकल जीलाई धन्यवाद यसमा हेड्स अप गर्नका लागि)।
स्पार्कल मार्फत स्वचालित अपडेटले काम नगर्न सक्छ त्यसैले कृपया यस पटक म्यानुअली डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्।
थप परिवर्तनहरू चाँडै आउँदैछ ....
[मोड] युनिभर्सल / 64/32२ बिट कोड
[Mod] नयाँ कम्पाइलरको साथ कम्पाइल गरिएको
[फिक्स] Eudora को साथ टाइगर समस्या जुन स्थिर छ।
[फिक्स] अन्य बग फिक्सहरू।
[Mod] हिमचितुवा म्याक OS १०..10.6 अब 64 XNUMX बिटको लागि अद्यावधिक गरियो
[फिक्स] क्लिप ब्राउजरमा ग्राफिक्स।
[फिक्स गर्नुहोस्] नयाँ कम्पाइलरले भेट्टाएको केहि मुद्दाहरू।
[Mod] बिल्ट-इन वर्ड (क्लिप) प्रोसेसर बीन २.2.3 को अपडेट संस्करण
[थप्नुहोस्] "" इतिहास / अभिलेखमा सबै क्लिपहरू टाँस्नुहोस् "को लागी छुट्टै स्ट्रि enter प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
[थप्नुहोस्] ^dवा ^ t म्याक्रो विभाजित स्ट्रि intoमा मिति वा समय सम्मिलित गर्न प्रयोग गरिन्छ।
[फिक्स] फ्ल्याशिंग सम्पादन मेनू अनौंठो परिस्थितिमा हुन सक्छ। अब फिक्स गरियो
[फिक्स्] तान्नुहोस् र कोकोको मुनि ड्रप गर्न प्रत्येक सम्भावित डाटा प्रकारहरू प्रणालीसँग अलग पंजीकृत हुन आवश्यक छ। केही ग्राफिक प्रकारहरूले अभिलेख र इतिहास प्यालेटहरूमा ड्र्याग र ड्रपको लागि काम गरेनन् किनकि तिनीहरू दर्ता भएका थिएनन्। अब (यस संस्करणको साथ) त्यहाँ १०० भन्दा बढी बिभिन्न डाटा प्रकारहरू छन् जुन ड्र्याग एण्ड ड्रपको लागि रेजिस्टर गरिएको छ।
[थप्नुहोस्] URL छोटो पार्ने उपकरणसँग युआरएल छोटो बनाउनका लागि प्रयोग गर्न different बिभिन्न इन्टरनेट सेवाहरूबाट छनौट गर्न प्राथमिकताहरू (सामान्य) मा एक मेनू हुन्छ।
[नयाँ] उपकरण मेनूबाट छोटो URL हरू। एक इन्टरनेट जडान आवश्यक छ। त्यहाँ धेरै सेवाहरू उपलब्ध छन जसले यूआरएलहरू छोट्याएका छन। हामीले http://is.gd प्रयोग गर्‍यौं। हामी अरूलाई प्रयोग गर्न सक्दछौं। यसलाई प्रयास गर्नुहोस् तपाईको बिचार के हो हामीलाई थाहा दिनुहोस्। केहि लामो यूआरएल छान्नुहोस् यूट्यूब भिडियोको लागि जस्तै, छोटो URL उपकरणमा हिट गर्नुहोस् यसलाई कम २० वर्ण बनाउन। ठेगाना "https://plumamasing.com / product /copypaste" "http://is.gd/qspE" मा छोटो गरीएको छ। ट्विटरका लागि यस प्रकारको चीज धेरै सजिलो छ। अधिक प्रयोगहरू म्यानुअलमा छन्।
[फिक्स गर्नुहोस्] बिभिन्न सानो बगहरू र कस्मेटिक परिवर्तनहरू।
[Mod] डेनमार्क स्थानीयकरणको साथ बीन थपियो
[नयाँ] खुला सम्पादक उपकरण
[नयाँ] इस्लामी मिति उपकरण
[Mod] केही थप प्राथमिकताहरू।
[मोड] प्रिडीटरमा यसलाई क्लिप पेस्ट गर्न समायोजन गर्न प्रिन्ट गर्नुहोस् सम्पादकमा खोल्नुको सट्टा डबल क्लिकमा।
[Mod] हटकीमा क्लिप ब्राउजर बन्द गर्न एक प्रिफेस। क्लिप ब्राउजर त्यसपछि मात्र आदेश-माउस-स्क्रीन-किनारा द्वारा उपलब्ध छ।
क्लिप ब्राउजर हटकी बन्द गर्नाले दुई फाइदा हुन्छ:
१. तपाई बारम्बार मुख्य क्लिप पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ कमांड कुञ्जी जारी नगरीकन फेरि
२. साधारण आदेश-v ले इतिहासको पहिलो क्लिप टाँस्दछ, जबकि कमान्ड-वीभीले पछिल्लो पटक प्रयोग गरिएको क्लिप पेस्ट गर्दछ। (यसलाई प्रयास गर्नुहोस्, कमाण्ड- v-2 टाँस्नुहोस् र त्यसपछि कमान्ड-भिभीले जुन क्लिप # २ संग्रहबाट फेरि टाँस्नेछ। मात्र आदेश-वी र रिलिज ईतिहासको पहिलो क्लिप टाँस्दछ।)
[Mod] म्यानुअल अपडेट गरियो
[Mod] डेनिश अनुवाद
[नयाँ] इतिहास वा अभिलेखमा सबै क्लिपहरू विपरित क्रममा पेस्ट गर्न प्रकार्य लागू गर्दछ।
[Mod] LaunchBar चलिरहेको छ कि छैन जाँच गर्दछ र असंग LaunchBar सेटिंग्स परिवर्तन गर्न सिफारिश गर्दछ।
[फिक्स] स्पटलाइटमा टाँस्न अनुमति दिन्छ
[फिक्स] क्लिपप्यान्डको साथ समस्या समाधान गर्दछ लगातार काम नगरी।
[फिक्स गर्नुहोस्] मुद्दा ड्रीमवेभरको साथ
[फिक्स] iWeb को साथ मुद्दा
[नयाँ] पूर्वावलोकन दराज उपकरण मेनूले चयन गरिएका क्लिपबोर्डमा लागू गर्न सकिने अनुप्रयोग सेवाहरूको लागि श्रेणीबद्ध मेनू आईटम समावेश गर्दछ। यसले क्लिप डेटामा कार्य गर्न क्लिप उपकरणहरूको संख्या बढाउँदछ।
[Mod] LaunchBar रिमाइन्डर अब LaunchBar को पुराना संस्करणहरूमा देखा पर्दैन जुन असंगत थिएन।
[फिक्स्] PowerPC मा मुद्दा टाइगर (१०..10.4) को साथ भर्खरको परिवर्तनले परिचय गरेको सपनावीभर अनुकूलताको लागि।
[थप्नुहोस्] क्लिप प्यालेटहरू (इतिहास र अभिलेखहरू) थपियो।
[थप्नुहोस्] क्लिप प्यालेटको लागि ड्र्याग र ड्रप
[Mod] रेजिष्ट्रेसन बक्सले अब कुनै पनि सेता खाली ठाउँ र टाईप गरिएको इनपुटबाट नयाँ रेखा अक्षरहरू हटाउँदछ, जसले गर्दा कुनै पनि प्रयोगकर्ता दर्ता त्रुटिहरू कम गर्दछ
[Mod] प्रतिलिपिपास्ट प्रो प्राथमिकताहरूमा धेरै परिवर्तनहरू।
[Mod] ले केही पूर्वनिर्धारितहरू परिवर्तन गर्‍यो।
[Mod] म्यानुअल को लागि व्यापक अपडेट।
[Mod] क्लिपहरू बचत गर्दा यस संस्करणले केहि अधिक जाँच गर्दछ।
[Mod] धेरै UI परिवर्तनहरू।
[नयाँ] डेनिश, जापानी र जर्मन अनुवाद शामिल छ।
[Mod] अधिक अधिक उपयोगकर्ता अनुकूलन उपलब्ध।
[Mod] बीनको नयाँ संस्करण प्रयोग भयो।
[Mod] अझै सम्म copyPaste को सबै भन्दा राम्रो संस्करण।
[Mod] जापानी संसाधनहरू अपडेट भयो
[Mod] पूर्वावलोकन ड्रयर बन्द हुन्छ जब तपाईं क्लिप सम्पादन गर्न सुरू गर्नुहुन्छ
[Mod] अनावश्यक शीर्षक नभएको विन्डो नदेखाउन क्लिप सम्पादक परिवर्तन भयो।
[Mod] बीनसँग जर्मन स्रोतहरू छन्
[थप्नुहोस्] पाठ क्लिपहरू हटकी कमाण्ड-विकल्प-सी द्वारा थप्न सकिन्छ। यो प्रिफेसमा बन्द गर्न सकिन्छ।
[Mod] प्राथमिकताहरूको "सामान्य" सेक्सन अब अधिक ठाउँ लिन दुई खण्ड "प्रणाली" र "सामान्य" मा विभाजित गरिएको छ।
[फिक्स] टाइगरमा दुर्घटना (OS १०..10.4)
[फिक्स] प्रकार्यको क्र्यासले ईतिहास / अभिलेखबाट सबै क्लिपहरू टाँस्नुहोस्
[फिक्स गर्नुहोस्] एक समस्या जुन सपना वीवरको प्रतिलिपि टाँस्न सकिँदैन
यदि तपाईंले कपिपास्ट प्रो कहिले प्रयोग गर्नुभएको छैन भने म्यानुअल हेर्नु आवश्यक छ जुन यहाँ छ:
[फिक्स] केहि बग फिक्सहरू
[Mod] नयाँ बीनमा बग फिक्सहरू पनि समावेश छन्।
[Mod] ले लोड गर्ने क्रमलाई परिवर्तन गर्‍यो जब copyPaste सुरू हुन्छ, कि मेनु पट्टी आइकन अन्तिम आउँछ।
[फिक्स] ई-मेल एक्स्ट्रक्टरमा फ्रिज भयो जब तपाईं यसलाई चित्रहरूमा कल गर्नुहुन्छ।
आगामी एपिसोडमा ठाडो प्यालेटहरूको फिर्ताको।
[फिक्स] यस संस्करणले प्रत्येक नयाँ संस्करणमा एक पटक मात्र बीन सुरुवात गर्दछ। सेवा प्रदायकको रूपमा बीनको उपस्थितिको ओएसलाई सूचित गर्न योसँग एउटा सुरुआत हुनुपर्दछ।
[फिक्स] ईमेल एक्स्ट्रक्टर र युआरएल एक्स्ट्रैक्टर सबै परिस्थितिमा स्थिर काम गर्दछ।
[नयाँ] क्लिप ब्राउजरमा एक क्लिप को पाठ आकार अब %०% देखि २००% मा स्केलेबल छ (प्राथमिकता एनिमेसन ट्याब हेर्नुहोस्)
[नयाँ] डेनिश स्थानीयकरण थपियो
[फिक्स] कीक्यूको लेखकसँगको सहकार्यमा कुञ्जी समस्या समाधान गरियो।
फिक्स] बीन सम्पादकले अब निरन्तर चयन र क्लिपहरू सम्पादन र खोल्नु पर्छ
[Mod] अब, यदि तपाइँ अभिलेख वा ईतिहासमा सबै क्लिपहरू मेटाउनुहुन्छ र नमूना क्लिपहरू पुन: सुरु गर्नुहुन्छ भने पुन: देखा पर्दैन। तिनीहरू मात्र देखा पर्छन् यदि संग्रह वा ईतिहासको लागि फोल्डर संरचना अब अवस्थित छैन, जुन केवल यदि तपाईं तिनीहरूलाई मैन्युअल रूपमा मेटाउनुहुन्छ भने मात्र हुन सक्छ।
[Mod] यदि तपाईं "ईतिहासमा सबै क्लिपहरू संग्रह गर्नुहोस्" भने प्रक्रिया simply 43 क्लिपहरू पछि मात्र रोकिदैन (अर्काइभका लागि अधिकतम रकम) तर यसको सट्टामा क्लिपको अर्को गुच्छा भण्डार गर्न नम्बर वृद्धि भएको नयाँ संग्रह थपियो।
[Mod] यस अतिरिक्त रूपमा "यो क्लिप लक गर्नुहोस्" प्रकार्य संग्रह मेनुमा संग्रह क्लिपमा तपाई क्लिप ब्राउजरको पृष्ठभूमिबाट प्रासंगिक मेनुमा "लक क्लिपहरू सबै" क्लिप द्वारा संग्रहमा सबै क्लिपहरू लक वा अनलक गर्न सक्नुहुनेछ।
[फिक्स] प्रासंगिक मेनूबाट पीपीसी / इंटेलमा स्थिर क्र्यास
[फिक्स] लक क्लिप बग फिक्स गरियो
[फिक्स] अभिलेख बग पुन: नामाकरण ठीक गरियो
[[नयाँ] स्पेनिश स्थानीयकरण लागू गरियो तर हाल अंग्रेजी म्यानुअलमा लिंक छ।
[फिक्स] सफारी र मेलमा प्रासंगिक मेनू प्लगइनका कारण क्र्यास भयो
[फिक्स] दुर्घटनाग्रस्त हुँदा क्लिप ब्राउजर क्लिप संग्रहमा बदलियो र सामान्य प्रतिलिपि गरियो (१.०.२ मा नयाँ बग थियो)
[फिक्स] लक क्लिपबोर्ड सुविधा अब सही तरीकाले काम गर्दछ।
[फिक्स] अनुप्रयोग मेनू जो देखा पर्दछ मात्र प्राथमिकता विकल्प डक आइकन र मेनू जाँच काम गर्दछ देखिएको छ।
[नयाँ] फ्रेन्च स्थानीयकरण र म्यानुअल थपियो
[नयाँ] फ्रान्सेली, जर्मन, स्पानिश्च, डेनिस स्थानीयकरण बीनमा थपियो।
[नयाँ] क्लिप ईतिहाससँग क्लिपको क्रमलाई इतिहासमा फर्काउन नयाँ प्रासंगिक मेनु आदेश छ
[नयाँ] प्रतिलिपिपास्ट मेनूसँग क्लिप ईतिहास मेनूमा नयाँ आदेश छ क्लिपको क्रम पूर्वमा फर्काउन।
[नयाँ] क्लिप संग्रहमा क्लिपहरू (ईतिहासमा होईन!) क्लिप मेटाउन वा प्रतिस्थापन हुनबाट रोक्नको लागि "लक क्लिप" आदेश प्रदान गर्दछ। लक गरिएको क्लिपले "अनलक क्लिप" आदेश प्रदान गर्दछ।
[नयाँ] डाउब वीमा क्लिप ब्राउजर देखाउन कुञ्जी सेट गर्न प्राथमिकताहरूमा नयाँ विकल्प छ। यदि यो जाँच गरिएमा तपाईले क्लिप ब्राउजर पत्ता लगाउन पहिलो क्लिप (ढिलाइ नगरी) डबल-वी थिच्न सक्नुहुनेछ। यदि जाँच गरिएन भने साधारण आदेश v ले ब्राउजर (ढिलाइ पछि) देखाउँदछ, र दोस्रो V ले दोस्रो क्लिप चयन गर्दछ।
[नयाँ] दोहोरिएको v सँग अर्को क्लिपको चयन अब कार्य गर्दछ यदि ब्राउजर अझै फेड-इन ढिलाइमा "ह्याs्ग" हुन्छ। यस संस्करण अघि दोस्रो v मात्र मूल्या was्कन गरिएको थियो जब ब्राउजर पहिले देखि नै देखिएको थियो।
[फिक्स] कीक्यू अनुकूलता, कीप्यू एचयुडी विन्डो देखा पर्दैन जब प्रतिलिपिपास्टले क्लिप ब्राउजर प्रदर्शित गर्‍यो। फिक्स्ड तर अपडेट गर्न आवश्यक छ।
[फिक्स] प्रासंगिक मेनू क्लिप उपकरणमा अन्तिम आईटमहरू अब काम गर्दछन्, ती दु: खी प्रोग्रामर त्रुटिको कारणले गर्दा होईन।
[फिक्स] केही प्रोग्राम विशेष समस्यामा एक्सेल जसले सेलहरूको दुई पटक प्रतिलिपि गर्छ निश्चित गरियो
[फिक्स] समस्या कि किबोर्ड द्वारा एक असफल प्रतिलिपि पछि, अर्को प्रतिलिपि क्लिप ईतिहास मा मा प्राप्त भएन।
[Mod] यदि तपाईंले सी कुञ्जी टाइप गर्नुभयो भने तपाईंले कुनै टाँस नगरी कुञ्जीपाटी बोलाइएको ब्राउजरबाट भाग्न सक्नुहुन्छ। यसले ब्राउजरलाई पनि मोड्न थाल्छ, तर यदि तपाइँ सबै कुञ्जीहरू रिलीज गर्नुहुन्छ भने मोड पनि अवरूद्ध हुन्छ र साथ साथै टाँस्छ। हामी यसको लागि एस्के कुञ्जी प्रयोग गर्न सक्दैनौं किनभने यसले फ्रन्ट रोलाई कल गर्दछ। अन्य सबै कुञ्जीहरू या त अभिलेखको लागि हटकीजको रूपमा प्रयोग गरिएको छ वा व्यावहारिक होइन। त्यसैले टाँस्ने परित्याग गर्न c कुञ्जी प्रयास गर्नुहोस्।
[Mod] अनुरोध गरेर $ २० को लागि खरीद गर्न मिति प्रयोगकर्तालाई परीक्षणको पूर्ण महिनालाई अनुमति दिन 20१ मेसम्म विस्तार गरिएको छ। जून मा शुरू यो $ 31 मा जान्छ।
[थप्नुहोस्] प्रासंगिक मेनु अब स्थापना र prefs विन्डोबाट हटाउन सकिन्छ।
[थप्नुहोस्] विकल्प कुञ्जीको साथ ब्राउजर खोल्नुहोस् यसले खुला रहन्छ (टाँसिएको)।
[थप्नुहोस्] विकल्प कुञ्जीको साथ ब्राउजर फ्लिपिंग यो खुला रहन्छ (टाँसिएको)।
[Mod] बीन (क्लिप सम्पादक) संस्करण १.२ मा अद्यावधिक गरिएको छ।
[Mod] चेक अपडेटहरू प्रिफ्समा चेक बक्स हो। यो पूर्वनिर्धारित मा छ। स्पार्कलले पृष्ठभूमिबाट हप्तामा एक पटक जाँच गर्दछ।
[Mod] क्लिपहरूको न्यूनतम संख्या वास्तवमै छोटो ईतिहासको लागि २ हो।
[Mod] अब एक संवाद 30० दिन पछि देखा पर्दछ यसले प्रयोगकर्तालाई शटडाउनमा खरीद गर्न सम्झाउँदछ।
[मोड] ब्राउजर स्थान पुन: सुरुको माध्यमबाट सम्झियो।
[फिक्स] लगइन सेटि settingsहरू अब सहि कोपिपास्टको चलिरहेको संस्करणको सम्बन्धमा राम्रोसँग प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यसैले यदि तपाईंले अरू कुनै ठाउँबाट कपिपास्ट सुरू गर्नुभयो भने, यसले लगइन सेटिंग अनचेक देखाउँदछ।
[फिक्स] पपचार र टाइपिनेटरको साथ असंगति स्थिर भयो।
[फिक्स] हराइरहेको मेनुहरू जब कोही वास्तवमा पागल हो भने क्लिपहरूको संख्या शून्यमा तय हुन्छ
[फिक्स] एउटा क्लिप सive्ग्रह गर्नुहोस् र क्लिपको लागि नयाँ हट कुञ्जी सेट गर्नुहोस् अब कपिपास्ट स्थिर हुँदैन
[फिक्स] "सम्पादकमा खोल्नुहोस् चयन" सधै रिसेट नगरिएको झण्डाका कारण सम्पादकमा मेनुद्वारा लगातार प्रतिलिपिहरू खोल्दछ।
पहिलो सार्वजनिक १.० संस्करण रिलिज भयो। यदि तपाईंले कपिपास्ट प्रो प्रयोग गर्नुभएको छैन भने मन्नुअल हेर्नु आवश्यक छ जुन यहाँ छ:
[थप्नुहोस्] एनिमेसन ट्याबमा फ्लिप र जिनि एनिमेसन असक्षम गर्न नयाँ प्राथमिकता वस्तु। ढिलो म्याक्समा राम्रो विचार।
[थप्नुहोस्] एक नयाँ प्राथमिकता आईटम जब जब प्रत्येक तान्छ र इतिहासमा अन्य प्रतिलिपिहरूको साथ ड्रप गर्दछ। यो कपिपास्ट गर्नको लागि अनुपम सुविधा हो। सफारीबाट कुनै तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस् र तान्नुहोस् र क्लिप ईतिहास जाँच गर्नुहोस् र यसलाई कार्यमा हेर्नुहोस्।
[थप्नुहोस्] पहिलो पटक प्रयोगकर्ताहरूका लागि अब इतिहास र अभिलेखमा डमी क्लिपहरू छन्। यी उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जब प्रयोगकर्ताले सर्वप्रथम कपिपास्ट प्रो प्रयोग गर्दछ।
[मोड] द्रुत-प्राथमिकता मेनू परिवर्तन भयो जुन प्रासंगिक मेनू क्लिकमा फ्लोटिंग प्रतिमाबाट तल झर्दछ वा जब तपाइँ माउसलाई थिच्नुहुन्छ (तान्नुहोस्, यसले मेनु रोक्दछ!)
[Mod] त्यहाँ आइकनबाट खोल्दा ब्राउजरको व्यवहारमा १/ the सेकेन्डको ढिलाइ हुन्छ जसले विन्डोबाट छिट्टै पार गर्न अनुमति दिईन्छ। र जसले यसलाई १/ closing सेकेन्ड भित्र ब्राउजर विन्डो बाहिर माउस सार्दा यसलाई बन्द नगरी यसलाई वरिपरि तान्न अनुमति दिन्छ।
[बग] क्लिपहरू बचत गर्दै जसले एकल क्लिपहरू मेटाईएको बेला अप्रत्याशित परिणामहरू निम्त्याउँथ्यो।
[बग] ब्राउजर बगमा ड्र्याग निश्चित भयो।
- नयाँ प्रासंगिक मेनु प्लगइन जसले माउसलाई "स Copy्ग्रहमा प्रतिलिपि गर्नुहोस् ..." मेनू कमान्डमा जान अनुमति दिन्छ वर्तमान संग्रहमा अर्को नि: शुल्क स्लटमा प्रतिलिपि गर्न।
- नयाँ कुञ्जी आदेश, जस्तै आदेश + डबल सी (सी र त्यसपछि सी) जो हालको पुरालेखमा अर्को नि: शुल्क स्लटमा सिधा प्रतिलिपि गर्न अनुमति दिन्छ।
- मेनू जसले फ्लोटिंग प्रतिमाबाट ड्रप गर्दछ केही प्राथमिकताहरू देखाउँदछ जुन तपाईं यहाँ प्राथमिकता विन्डो भन्दा छिटो सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
- भर्खरको बीन स्रोतहरू कपप्यास्ट आवश्यकताहरूमा अनुकूलित गरियो र नयाँ बीन बन्डलमा छ। पुरानो कपिपास्ट संस्करणमा ती सहित बीनका सबै अन्य संस्करणहरू मेट्न यो सामान्य रूपमा आवश्यक छ (कोपाइप्यास्टको पुरानो संस्करण नराख्नुहोस्), जुन खोजीकर्ताले खोज परिणामहरूमा देखाउँदैन। पूर्ण रूपमा कार्य गर्नको लागि पनि कपिप्यास्ट अनुप्रयोग फोल्डरमा स्थापना हुनुपर्दछ।
- यो एक प्राथमिकता मा एक नयाँ "हराएको पासवर्ड" बटन लागू गर्दछ,
- फ्लोटिंग आइकनबाट प्रतिलिपिस्टेस्ट मेनू अब सही ढ works्गले काम गर्दछ
- ब्राउजर कार्य को पृष्ठभूमि मा प्रासंगिक मेनू बाट स्टिकी आदेश बनाउनुहोस्
- द्रुत प्रतिलिपिको लागि ढिलाइ समायोज्य छ (पीटरको पीटरको विचार होइन)
- अब सानो क्लिपबोर्ड प्रतिमा प्रयोग गरेर ब्राउजर खोल्न सक्दछ।
- सानो क्लिपबोर्ड आइकनमा क्लिकले अब ब्राउजर टर्न गर्दछ।
- क्लिक गर्नुहोस् र समाउनुहोस् (वा ctrl-क्लिक) सानो क्लिपबोर्ड आइकनमा कपिपास्ट मेनू देखाउँदछ
यी तीनै सबै कार्य गर्दछन् यदि सानो क्लिपबोर्ड आइकन देखाउँदैछ र त्यो प्राथमिकताहरूमा नियन्त्रण गरिन्छ।
द्रुत प्रतिलिपि प्रकार्य (पुरानो कोपाइपस्टबाट) अब प्राथमिकताहरूमा सक्षम गर्न सकिन्छ। केहि चयन गर्नुहोस् र एक सेकेन्डको लागि माउस बटन होल्ड गर्नुहोस् र यसले प्रतिलिपि गर्दछ। कतै क्लिक गर्नुहोस् र एक सेकेन्डको लागि बटन समात्नुहोस् र यो टाँस्दछ।
- प्राथमिकतामा एक नयाँ बटनले कोपिसप्याट एक्सबाट क्लिपसेटहरू आयात गर्न अनुमति दिन्छ (ध्यान दिनुहोस् कि यदि तपाईंसँग उही नामको कोपिसप्ट-प्रो अभिलेखहरू छन् भने, यो आदेशले यी अभिलेखहरूमा क्लिपहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्थापन गर्दछ।) कुनै पनि पुरानो कपिपास्टलाई ब्याक अप गर्न निश्चित गर्नुहोस्। अभिलेखहरू यो प्रयोग गर्नु अघि।
- फ्लोटिंग क्लिपबोर्ड आइकन (प्राथमिकतामा छ भने) स्मार्टले आफैलाई लुकाउँछ यदि डीभीडी प्लेयर, vlc, eyetv अगाडि छ।
- प्राथमिकताहरू अब प्रयोगकर्ताहरूलाई ईमेल र पासवर्ड भण्डारण गर्दछ र प्रक्षेपण समयमा उनीहरूसँग तुलना गर्दछ। यसले पुन: दर्ता जानकारी प्रविष्ट गर्न आवश्यक बनाउँदछ। एक्स्टर्मिनेटर @ काम अझै पनी काम गर्दछ तर चाँडै समाप्त हुनेछ।
- एक नयाँ प्रासंगिक मेनू जसले क्र्यासलाई वेवास्ता गर्दछ जब कोपिपास्ट चालू छैन। यो स्वचालित रूपमा स्वत: स्थापना गर्दछ, तर तपाईं मेल र सफारी छोड्नुहोस् र फेरि सुरु गर्नुहोस्। कारण यो छ कि प्रणाली जहिले पनि प्रत्येक चलिरहेको प्रोग्रामको लागि स्मृतिमा सबै प्रासंगिक मेनु प्लगइनहरूको प्रतिलिपि बनाउँदछ। तसर्थ यदि तपाईं नयाँ प्रासंगिक मेनु प्लगइन स्थापना गर्नुहुन्छ भने पनि, पुरानो प्रयोग हुनेछ जबसम्म तपाईं प्रत्येक प्रोग्राम पुन: सुरु गर्नुहुन्न। कारण किन तपाईंले कहिलेकाँही सम्पूर्ण कम्प्युटर पुन: सुरु गर्नुपर्दछ।
- अन्य बग फिक्सहरू।
- तपाईं मेनूबार-मेनूबाट संग्रहमा सिधा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुनेछ। केही पाठ हाइलाइट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईं अवस्थित स्लट चयन गर्नुहोस्, क्लिप त्यहाँ जान्छ। यदि तपाइँ "आर्काइवमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्: .." मा जान दिनुहुन्छ भने प्यारेन्ट मेनू आईटम, तपाइँ अर्काइभमा अर्को नि: शुल्क हटकीको साथ क्लिप थप्नुहुन्छ। त्यस स for्ग्रहको लागि बिभिन्न हटकी सेट गर्नको लागि तपाईंले किबोर्ड आदेश-c- # प्रयोग गर्नुपर्नेछ वा तपाईंले पछि क्लिप ब्राउजरबाट कुनै निर्दिष्ट हाटकी परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
- यदि तपाइँ "स्क्रिन एजमा कमान्ड माउसमा ब्राउजर देखाउनुहोस्" सक्रिय गर्नुभयो भने तपाईले दायाँ पछाडि र बायाँ तिरबाट संग्रह दृश्यको साथ ब्राउजर पाउनुहुनेछ इतिहास ब्राउजमा तपाईले ब्राउजर पाउनुहुनेछ। यो क्लिपहरू हेर्नको लागि द्रुत तरीका हो। अभिलेखबाट इतिहासमा फर्कनको लागि कमाण्ड-सी अझै कार्य गर्दैछ
- इ-मेल टिप्पणीले अब 80० क्यारेक्टर पछि लाइन बिच्छेद गर्दछ (यदि शब्द सीमा पछि छ भने कम)
- तपाई प्रत्येक क्लिप सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ कमांड कुञ्जी समात्दै र इतिहास वस्तुहरूको मेनूमा गएर यसलाई चयन गरेर। त्यसो गर्दा बेनमा क्लिप खुल्नेछ यसले प्रासंगिक मेनुमा पनि काम गर्दछ।
- तपाईं विकल्प कुञ्जी प्रेस गरेर र मेनूबाट टाँस्न को लागी उडानमा शैली बिना पेस्ट गर्न प्राथमिकता सेटिंग रिभर्स गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब यदि यदि तपाइँ सामान्य रूपमा शैलीहरूको साथ पाठ टाँस्नुहुन्छ र तपाइँ विकल्प कुञ्जी थिच्नुहुन्छ भने, यो शैली बिना सादा पाठ पेस्ट गर्दछ।
यसले प्रासंगिक मेनुमा पनि काम गर्दछ।
- एउटा टिप्पणीले संकेत गर्यो कि सानो त्रिकोण ब्राउजरमा हिट गर्न गाह्रो छ। यो त्रिकोण हिट गर्न आवश्यक छैन यदि तपाईं सहि माउस बटन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, (वा दुई-फिंगर-ट्र्याकप्याड क्लिक)। त्रिकोण ती मानिसहरुका लागि हो जुन दायाँ माउस क्लिकको साथ मेनूलाई कसरी पत्ता लगाउने थाहा छैन।
- एउटा नयाँ उपकरण भनेको "सम्पादकमा खोल्नुहोस् चयन"
- एउटा नयाँ उपकरण "मेलमा चयन पठाउनुहोस्" हो।
- एउटा नयाँ उपकरण "URL को रूपमा चयन खोल्नुहोस्" हो
- प्रासंगिक मेनुको लागि स्थापनाकर्ताले अब अघिल्लो प्रो प्लगइनको साथ पुरानो प्रतिलिपिस्टेस्ट-एक्स प्लगइन हटाउँछ।
- नयाँ प्रासंगिक मेनु प्लगइन स्थापना गर्न निश्चित गर्नुहोस्। प्रासंगिक मेनू प्लगइन पनि अद्यावधिक गरिएको छ र माथिको परिवर्तनहरूसँग उपयुक्त हुनको लागि बदल्नु पर्छ।
- बीन (क्लिप सम्पादक) भित्र निर्मित छ। क्लिप ब्राउजर मार्फत खोल्नुहोस्।
१. बीन र कपिपास्टप्रोको पुरानो संस्करणहरू अनुप्रयोग फोल्डरबाट हटाउनुपर्नेछ
२.अनुप्रयोग फोल्डरमा प्रतिलिपि गरिनु पर्छ
Copy. तपाईले प्रणाली पुन: सुरु गर्नुपर्‍यो (वा लगआउट र भित्र जानुहोस्) कपिपास्ट भित्र बिन प्रणालीलाई सूचित गर्न।
- क्लिप ब्राउजर पूर्वनिर्धारित द्वारा बन्द छ र prefs मा खोल्न सकिन्छ।
- सबै प्रकार्यहरूमा स्पीडअप।
यो नयाँ संस्करणको लागि यो अहिले सम्म अपडेट गरिएको छैन। हामी यो बेटा बाहिर पछि यो हप्ता पछि चाँडै हुनेछ। जो कोही (कुनै पनि बीटा परीक्षक) जो म्यानुअलमा काम गर्न रमाईलो गर्दछ अपडेट गर्न र यसलाई सुधार गर्न मसँग सामेल हुन स्वागत छ।
अन्तिम संस्करणमा त्यहाँ निश्चित ढिलाइ थियो जब कमाण्ड- # कुञ्जी-कम्बोको साथ क्लिप अभिलेखहरू प्रयोग गर्नाले गलत क्लिपहरू टाँस्नको कारण भयो। यो तय गर्नु पर्छ। क्लिप अभिलेखहरू अवस्थित स्लटहरूलाई ओभरराइट गर्नेमा काम गर्दैनन्। यो निश्चित छ
बीन अब कपिपास्टे (एप्लिकेसन बन्डल) मा एकीकृत छ, जुन राम्रो चीज हो, तर (महत्त्वपूर्ण) तपाईंले तीनवटा चीजहरूको हेरचाह गर्नुपर्दछ:
१. बीनको पुराना संस्करणहरू र कोपिपस्टेप्रो अनुप्रयोग फोल्डरबाट हटाउनुपर्नेछ
२. कपिपिस्टे अनुप्रयोगको फोल्डरमा कपि गर्नु पर्छ
You. तपाईंले प्रणाली पुन: सुरू गर्नुपर्दछ (वा लग आउट र भित्र जानुहोस्) कोपाइस्टे भित्र बीनको प्रणालीलाई सूचित गर्न।
जब सम्म तपाईंले यी तीन चीजहरू गर्नुहुन्न, तपाईंसँग बिप इन ईन प्रयोग गरेर कुनै क्लिपबोर्ड सम्पादन सुविधा हुँदैन।
प्राथमिकताहरू केहि धेरै सफा गरीएको छ र पूर्वनिर्धारितहरू कम भ्रामक हुन सेट गरियो।
"लगइनमा सुरूवात" अब एक चेकबक्स हो र यसले प्रणाली प्रणाली प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसमा कार्य गर्दछ, जसको मतलब तपाईले देख्नुभयो कि * कुनै पनि * प्रतिलिपिस्टेट संस्करण लगइनमा सुरूको लागि दर्ता गरिएको छ कि छैन। यदि तपाईंले असक्षम गर्नुभयो र जाँच बाकस सक्षम गर्नुभयो भने, तपाईं सुनिश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि हालसालको कोपीपास्टेप्रोको लगइनमा सुरू गर्नको लागि दर्ता गरिएको छ। यदि तपाईले पछि प्रणाली प्राथमिकताहरू कापीपास्टेप्रो दर्ता गर्न प्रयोग गर्नुभयो भने, चेकबक्सले यसलाई सहि प्रतिबिम्बित गर्दछ र कोपिसप्टेप्रो पुन: दर्ता गर्न कोशिस गर्दैन। त्यो कोपाइप्यास्ट-एक्समा एउटा दुर्व्यवहार थियो।
कमान्ड-माउस-देखि-स्क्रीन-किनारा मा ब्राउजर खोल्न को लागी एक नयाँ सेटिंग छ। यो पूर्वनिर्धारित द्वारा बन्द छ। व्यवहार थोरै परिवर्तन भएको छ, ता कि तपाईले पहिले कमाण्ड कुञ्जी होल्ड गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि माउस सार्नुहोस्। स्क्रिनको किनारामा माउस पाउनु अत्यन्त विचलित भयो र ब्राउजर प्राप्त गर्नुहोस् जब तपाईं अन्य प्रकार्यहरूको लागि आदेश कुञ्जी प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। व्यवहार अहिले सन्तोषजनक हुनुपर्दछ।
यो काम गर्नु अघि अद्यावधिक विधि परिवर्तन भएको छ तर स्थिति विन्डो राख्दछ जुन कहिलेकाँही अन्य विन्डोजको पछाडि हुन्छ र दुर्भाग्यवश खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ कोप्यापिस्ट मेनूहरू सबै खतरनाक छोडिन्छ र मानिसहरूले कसरी कॉपिपास छोड्ने भनेर सोच्दै थिए।
- तेर्सो ब्राउजर पहुँच गर्न नयाँ टेक्निक। कमाण्ड कुञ्जी समात्नुहोस् र कर्सरलाई विन्डोको दायाँ वा बायाँ सार्नुहोस्।
- मेल मार्फत क्लिप पठाउन क्लिप ब्राउजर प्रासंगिक मेनूमा नयाँ उपकरण।
- ठाडो क्लिप ब्राउजर हटाईयो (यो फरक प्रकारमा फर्कनेछ)।
- अद्यावधिक मेनू र कोड थपिएको जाँच गर्नुहोस् (अझै काम गर्नको लागि सेटअप गरिएको छैन)।
- बीन सम्पादक क्लिप सम्पादन गर्न र सुरक्षित गर्नका लागि थपियो (इतिहास वा अभिलेखहरू)
- RTF को रूपमा ब्राउजरमा क्लिपहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् जसको मतलब शैलीहरू र रंगहरू समावेश छन्।
- तेर्सो ब्राउजर अब ईतिहास मा or० वा अधिक क्लिपको साथ अझ राम्रो र छिटो काम गर्दछ।
- दर्ता थपियो।
- धेरै अन्य चीजहरू ....
पछिल्लो संस्करण सधैं साइटमा वा यहाँ उपलब्ध छ डाउनलोड। हामी भर्खरको संस्करण प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं।
पुरानो संस्करणहरूमा भिन्नताका लागि ChangeLog हेर्नुहोस्।
पछिल्लो संस्करण 3.7.9 थियो। यसलाई डाउनलोड गर्न यहाँ ट्याप गर्नुहोस्। यसले Mac OS 10.13-12.0 सँग राम्रोसँग काम गर्छ
यो पुरानो संस्करण कपप्यास्ट 3.7.4.। ले म्याक ओएस सिएरा १०.१२ को साथ काम गर्दछ
यो पुरानो संस्करण TextExpand का साथ काम गरीन्छ
यो धेरै पुरानो संस्करण म्याक ओएस १०..10.4 सँग काम गर्ने अन्तिम हो
यदि तपाईंलाई केहि पुरानो संस्करण आवश्यक छ भने हामीलाई भन्नुहोस् र हामी यसलाई यहाँ थप्नेछौं।
यहाँ पीडीएफ प्रारूपमा म्यानुअल डाउनलोड गर्न लिंक छ वा तल म्यानुअल हेर्नुहोस्।
म केवल copyPaste प्रो को लागी मेरो सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु जुन मैले १ 1988 XNUMX मा मेरो पहिलो म्याक पाएको बर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको छु। मलाई मनपर्ने केहि चीजहरू भने गएका छन्, PageMaker जस्ता, तर अरूहरू copyPaste Pro, र PopChar जस्ता भएका छन् मसँग भएको छ। जब म नयाँ म्याक पाउँदछु म दुबैलाई तुरुन्तै राख्छु। मलाई थाहा छैन कसरी व्यक्तिहरू मेमोरीको साथ क्लिपबोर्ड बिना प्रबन्ध गर्दछन्। त्यसोभए धन्यवाद!
"यो बिना बाँच्न सक्दैन। फोटोशप प्रोफेशनलहरूको राष्ट्रिय संघको लागि मद्दत डेस्क निर्देशकको रूपमा (NAPP), म प्रत्येक दिन १०० ईमेल प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छु। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, NAPP का धेरै सदस्यहरू उही समस्याहरू र प्रश्नहरूमा नियमित रूपमा भाग लिन्छन्। प्रतिलिपिस्टेले मलाई दिनको हजारौं शब्दहरू टाइप गर्दछ, मलाई सरल कुञ्जीपाटी सर्टकटहरूको श्रृंखलाको साथ उत्तरहरू आपूर्ति गर्न दिँदै। कपिपास्ट बिना, मेरो प्रतिक्रिया समय ढिलो हुनेछ र त्यहाँ प्रतिक्रियाहरूमा क्रिक्टेन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। ”
पीट बाउर निर्देशक NAPP मद्दत डेस्क
“उत्कृष्ट! म १ 1990 XNUMX ० को दशकदेखि प्रतिलिपिपास्ट प्रयोग गर्दैछु। यो अपरिहार्य छ। एप्पल म्याक ओएस मा सीपी समावेश गरेको हुनुपर्दछ। थोरै सजिलो जीवनको लागि धन्यवाद। "
“उत्कृष्ट! मेमोरी पदचिह्न अब सानो र स्थिर छ। मलाई लाग्छ कि यस अनुप्रयोगले यसको प्रतिलिपि गर्न र अधिक प्रतिस्पर्धी (छोटो साधारण किस्ट्रोकहरू) अन्य प्रतिस्पर्धी अनुप्रयोग भन्दा टाँस्ने आधारभूत काम गर्दछ। अत्यधिक सिफारिश गरिएको।
fxt (versiontracker.com मा)
"म सँधै नयाँ म्याक सुरु गर्दा शुल्क तिर्दछु किनकि म यो उत्पादनलाई यति धेरै प्रेम गर्दछु। यो तपाईको सबैभन्दा ठूलो समय बचतकर्ता हो जब तपाई कुनै ई-मेलमा मानक उत्तर प्रयोग गर्नुपर्दछ। सबै भन्दा उत्तम यो गन्ती जत्तिकै सजिलो छ। ”
"CopyPaste-X जसरी यसको MacOS को लागि पूर्ववर्ती मास्टरपीस हो। तपाईं यो बिना कल्पना कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र .pdf- समर्थन र अस्पष्ट खोजको साथ नयाँ सम्पादन समारोह (समान ध्वनिहरूको लागि पनि जान्छ) ठूलो छ! ”
इमानुएल (versiontracker.com मा)
“अझै सबै भन्दा राम्रो। दिनको कम्तिमा २० पटक यसको प्रयोग हुन्छ। म्याक .20 .२ मा पुरानो थियो, यो नयाँसँग धेरै धेरै सुविधाहरू छन् जुन धेरै लेख्ने वा धेरै सम्पादन गर्नेका लागि धेरै राम्रो छ। यो एक उत्कृष्ट उत्पादन र पाएकोमा खुशी छ। "
"उत्कृष्ट कार्यक्रम। यो एक सफ्टवेयर हो जुन म बिना कहिल्यै पनि हुँदैन। मैले यसलाई वर्षौंसम्म प्रयोग गरिरहेको छु र यो बिना काम गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिन। जूलियनले मलाई केहि प्रश्न गरेको थियो, प्रतिक्रियाको लागि तुरुन्तै। उसले मलाई चिन्दैन, तर मलाई परिवार जस्तै व्यवहार गरे राम्रो भन्दा राम्रो भने। एक उत्कृष्ट कार्यक्रम को लागी धन्यवाद। "
slb4010_dotmac versiontracker.com मा
"म एक पटकमा एक भन्दा बढी आईटमको प्रतिलिपि गर्न सक्षम नगरेकोमा म एप्पललाई सराप दिन्छु।" तर प्रशंसक उदार प्रोग्रामरहरूको हो। सेयरवेयर.क.मा, मैले एउटा अनुप्रयोग पत्ता लगाए जसले मेरा प्रतिलिपि गर्ने क्षमताहरू टेबल्डमा विस्तार गर्दछ। कपिपास्टको निफ्टी पाठ प्रसंस्करण उपकरणले तपाईंलाई केस, ट्याब, वा पाठ फाइलहरू, चित्रहरू, र ध्वनिहरू क्लिपबोर्डमा हाल्न अनुमति दिन्छ - फ्लोटिंग प्यालेटले कहाँ हो ट्र्याक गर्दछ। निएटर पनि क्लिप सive्ग्रह हो, जसले तपाईंको डेस्कटपमा प्रतिलिपि गरिएको वस्तुहरू फोल्डरमा खसाल्छ - अनलाइन अन्वेषकहरूका लागि अत्यन्त सुविधाजनक। ” - अधिक ...
डेबी एल्किन्ड, वायर्ड पत्रिका
"तपाईले पाउनुहुनेछ कि प्रतिलिपिस्टे अचम्मै सानो छ र, मेरो मनपर्ने शेयरवेयर उपयोगिताहरु जस्तै यो एक लजालु व्यक्तित्व छ - तपाई यसलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र यो सावधानीपूर्वक तपाईको बेक र कलमा फर्किनेछ।" - अधिक ...
क्याथी बेगियन, म्याकवर्ल्ड पत्रिका
"कुनै पनि प्रकारको लेखन गर्नेहरूको लागि, कपिपास्ट-एक्स एक अमूल्य उपकरण हो जुन सिक्न सजिलो छ, र एकचोटि तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने, यसमा बिना तपाईं कसरी पनी आउनुभयो भनेर अचम्म मान्नुहुनेछ। M.उन्न माईस मध्ये ”। अधिक ...
ड्यानी ग्रोभम्यान, म्याक गिल्ड
"कपिपास्ट: पावर उपयोगकर्ता र नोभिस एक जस्तै को लागी एक Godsend"
“यो सजिलो छोटो कार्यक्रम हो। यो अनुभवी प्रयोगकर्ता को लागी धेरै प्रदान गर्दछ, तर यसका केही पक्षहरु छन् जो नौसिखाहरु लाई धेरै सहयोगी हुन्छ। " - अधिक ...
न्यान्सी क्यारोल ग्रेभली,
"एकमात्र उपयोगिता जसको लागि म सत्य रहिरहेछु त्यो स्क्रिप्ट सफ्टवेयरको अद्भुत मानिसहरूबाट सदा-मनपर्दो कपिपास्ट हो। CopyPaste जब निकालिएको छ, तपाईलाई १०० क्लिपबोर्डहरू प्रदान गर्दछ जहाँ तपाईं आवश्यक बिट्स र कागजातहरूको टुक्रा, URL चाहानुहुन्छ र तपाईंलाई चाहिने चीजहरू भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि प्रयोग गर्नुहोस्। ”
भ्याकूवर सन लेख
"Si vous voulez gérer totalement vos presse-papiers (les sauvegarder, लेस एडिएटर, लेस आयोजक बराबर), copyPaste est fait pour vous। De même, si vous voulez retre aidé à la saisie, sa fonctionnalité yType peut vous aider। Et vu la densité de possibilités, लगभग 30० $ माँगको माग छ नयाँ Semblent pas exagérés। " - अधिक ...
"म कपिपास्ट प्रो २.० प्रयोग गर्दछु (पीटर होर्स्टर र जूलियन मिलर द्वारा) सबै समय! यो मेरो म्याकमा एकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एड-अन सफ्टवेयर हो!
प्रतिलिपिस्टेस्टमा भर्खरको अपग्रेडको लागि धन्यवादको मात्र एक शब्द: यो अघिल्लो अवतारमा गम्भिर सुधार हो। यो वास्तव मा उपलब्ध add-on सफ्टवेयर को एक राम्रो टुक्रा हो। मैले यसलाई वर्षौंदेखि प्रयोग गरिरहेको छु र यो बिना बाँच्न गाह्रो लाग्छ। अब यो अझ राम्रो छ! शुभकामना
यो बिना म्याक छैन!
माइकल जे वारेन
CopyPaste को यो नयाँ संस्करण मार्केटमा ल्याउनु भएकोमा धन्यवाद। म २००२ (OS2002) बाट प्रतिलिपिपस्ट प्रयोग गर्दैछु, र अझै प्रत्येक दिन यसलाई निर्भर गर्दछ! मैले अन्य क्लिपबोर्ड अनुप्रयोगहरू प्रदर्शन गरेको छु, तर कपप्यास्ट सर्वश्रेष्ठ हो! डेव Wheelock
म यसको बिना म्याकोन्टसको प्रयोग गर्न सक्दिन। मलाई लाग्छ यो राम्रो ईन्जिनमा ईन्धन ईन्जेक्टर हो।
लेस्ली बेन्स्कोटर, डेडवुड, ओरेगन
बिल्कुलै आवश्यक। म एक दिनमा पटकको संख्या गणना गर्न सक्दिन जब म कोप्यापस्ट प्रयोग गर्दछु। तपाइँ सबैलाई थाहा छ कि माइक्रोसफ्ट र एप्पलले अब यो विचारलाई उनीहरूको ओएसमा प्रतिलिपि गरेर टाँस्नेछ र भुक्तान गर्दैन, हैन? के यो तपाईसँग धेरै पटक पहिले भएको छैन?
[यसका लागि सरल उत्तर हो हो।]
धन्यवाद एक महान र अपरिहार्य सफ्टवेयर को टुक्रा को लागी धन्यवाद! मलाई लाग्छ कि यो कल्पित छ!
यो बिना बाँच्न सक्दैन !!! राम्रो उत्पादन! यो अपरिहार्य छ र यसको विकासको लागि धन्यबाद!
मैले अन्ततः तपाईंको सर्वरलाई तपाईलाई भुक्तान गर्न राजी भएँ। म धन्य छु। जबदेखि मैले इंटेल म्याक चलाएको चितुवा पायो कोपिपस्टे एकदम हरायो। यो अपरिहार्य छ!
केटीलाई राम्रो समय कसरी देखाउने भनेर तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ! [हामी विश्वास गर्छौं कि उनले कपिपास्टलाई स refer्केत गरिरहेकी छ]
मलाई सीपीको पुरानो संस्करण मनपर्‍यो, तर मैले स्वीकार्नु पर्छ, नयाँ संस्करण अझ राम्रो छ। मैले सोचेको थिइनँ! तपाईको सबै मेहनतको लागि धन्यवाद। सुरुमा म कपिपास्टमा कुनै परिवर्तन गरेकोमा चिन्तित थिएँ। अब म तपाईको काममा खुशी छु र म फेरि जान चाहन्न!
CopyPaste Pro: एकचोटि तपाईंले यो प्रयास गर्नुभयो भने, तपाईं यसलाई बिना कसरी बाँच्न सकिन्छ भनेर अचम्म लाग्नुहुन्छ!
प्रा डा। गेब्रियल डोराडो, आणविक जीवविज्ञान र बायोइन्फर्मेटिक्स
परियोजना प्रबन्धक / कम्प्युटर प्रणाली प्रबन्धक
तपाईको कपिपास्ट र TypeIt4Me मेरो कम्प्युटरमा दुई सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएका अनुप्रयोगहरू हुन् र खुशीले सँगै बर्षसम्म काम गरे। कृपया यो फेरि हुने छिटो नै गर्नुहोस्। यदि तपाईंले गर्नुभयो भने, म तपाईंको पछि मेरो अर्को बच्चाको नाम राख्नेछु। अवश्य पनि यसले केहि समय लिन सक्दछ, किनकि म अक्टुबरमा मेरो आगामी जन्मदिनमा सत्तरी बन्ने छु। : ^ D
कपिपास्ट टेरिफिक हो। यो मेरो म्याक प्रणालीमा रमाईलो थपिएको छ। सबै सुविधाहरू स्वागत छ र मेरो काम एकदम सरल बनाएको छ। राम्रो काम गरीरह्नु। म नयाँ आविष्कारहरूको लागि हेर्नेछु। WS
अपग्रेड जानकारीका लागि धन्यबाद। CopyPaste अपरिहार्य छ! मेनमा JF
कपीपास्ट पुष्टिकरण पठाउनु भएकोमा धन्यवाद। यो Maelstrom र EasyEnvelopes र राम्रो मूल्य लायक पछि सबै भन्दा राम्रो शेयरवेयर कार्यक्रम हो। म ओक्लाहोमा स्टेट युनिवर्सिटीको फ्याकल्टीमा छु र मुख्य रूपले घरबाट ओएसयू मेनफ्रेममा जडान भएको बखत प्रतिलिपिपस्ट प्रयोग गर्छु। एक पटकमा एक पटक पछाडि र पछाडि स्विच गर्नु भन्दा एकचोटि सम्पूर्ण क्लासको नामांकन प्रतिलिपि गर्न सक्षम हुन यो अत्यन्त उपयोगी र समय बचत हो; तथ्य यो हो कि मैले पनि सबै क्यापहरू हटाउन सक्छु जुन कम्प्युटरका मानिसहरूले रुचाउँछन् केकमा आइसिंग गर्ने हो।
सज्जन: मेरो टोपी तपाईंलाई बन्द। ठूलो उपयोगिता एकदम राम्रो भयो, यसमा कुनै श doubt्का छैन। मैले भर्खर यसलाई डाउनलोड गरेको छु र पछिल्लो तीस मिनेट यसको सुविधाहरू जाँच गर्न बिताएको छु। मलाई विशेष गरी नयाँ फ्लोटिंग विन्डोइड मनपर्दछ। फेरि, एक महान उपयोगिता को लागी धेरै धन्यवाद। म तपाईं सबै ठूलो सफलता को लागी, र यो जस्तै उपयोगिता संग, तपाईं ठूलो भाग्य हुनेछ। JS
म तपाईंलाई मात्र जानकारी दिन चाहान्छु प्रणाली Copy..7.5 पछि भएको सबैभन्दा राम्रो कुरा प्रतिलिपिस्टेस्ट हो। मलाई लाग्छ कि तपाईंले एप्पललाई अर्को सिस्टम अपग्रेडमा समावेश गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। फेरि, महान बृद्धि को लागी धन्यवाद। डन
अपडेटको लागि धेरै धेरै धन्यवाद! यो अहिलेसम्मको सर्वश्रेष्ठ सेयरवेयर हो जुन मैले प्रयोग गरेको छु! राम्रो काम गरीरह्नु। जेमी
कम्प्युसर्भबाट आज मैले तपाईंको प्रतिलिपिपस्ट विस्तार V २..2.5.4. download डाउनलोड गर्न राम्रो भाग्य पाएँ र मलाई लाग्छ कि म अहिले सम्म देखेको बहु क्लिपबोर्ड सुविधाको सबै भन्दा राम्रो कार्यान्वयनको बारेमा हो र तपाईं यो कुरा ठीक हुनुहुन्छ कि एप्पलले यसलाई भागको रूपमा समावेश गर्नुपर्दछ। प्रणाली सफ्टवेयर। JL
म वास्तवमै यो उपयोगी लाग्छ। EL
गत शुक्रवार मैले माथिको शानदार कार्यक्रमको लागि विशेष डिलिभरी स्नेलमेलमार्फत तपाईंलाई मेरो शेयरवेयर शुल्क पठाएको छु। कस्तो अविश्वसनीय समय-बचतकर्ता! म अत्यन्तै खुशी भएँ किनभने मैले यो पाएँ र यसलाई घुमायो। यो प्रत्येक पैसा र अधिक लायक छ। RT
मैले फेला पारे कि प्रतिलिपिपास्टले कुनै पनि बहु-क्लिपबोर्डहरूको सबैभन्दा उपयोगिता प्रदान गर्दछ। JW
म तपाईलाई यो बताउन चाहान्छु कि म तपाई जस्तो धेरै किसिमका कार्यक्रमहरूसँग खेल्दैछु र तपाईले निर्णय गर्नु भएको प्रयोगको सहजताको सन्दर्भमा सबै भन्दा राम्रो हो र, विशेष गरी, यसको क्षमता अन्य कार्यक्रमहरूको साथ सह-अस्तित्वको लागि। RL
मैले भर्खरै "copyPaste २..20.00. ((US)" को लागि .2.5.4 २०.०० सेयरवेयर शुल्क (नगद) पठाएको छ। CopyPaste एक महान कार्यक्रम हो! DS एरिजोना, संयुक्त राज्य अमेरिका
यो सफ्टवेयरको एकदम अविश्वसनीय टुक्रा हो र यसको लागि मेरो शुल्क बुझाउँदा म खुसी छु! विगतका केही वर्षमा मैले धेरै 'मल्टि-क्लिपबोर्ड' प्रोग्रामहरू प्रयास गरेको छु, तर अहिले सम्म म आफ्नो म्याकमा ठीकसँग काम गर्नको लागि पर्याप्त स्थिर कहिल्यै फेला पार्न सकेको छैन। (यसले मलाई विश्वास गर्दछ, प्रतिलिपिपेस्टको पुरानो संस्करणहरू पनि समावेश छ!) म म्याकिन्टोस एलसीआईआई प्रयोग गर्दैछु जुन st 33 मेगाहर्ट्ज ०040० मा डेस्टार एक्सेलेटरको साथ द्रुत गरिएको छ। मसँग MMB आन्तरिक र्याम छ, जुन M२MB सम्म बम्प गरिएको छ RAMDoubler प्लस फ्रीवेयर र्यामडुब्लर PUMP प्रयोग गरेर। मसँग हाल 8१ आईकनहरू छन् जुन मेरो स्क्रिनमा स्टार्टअपमा परेड हुन्छ र त्यसैले तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि मलाई कपीस्पेस्ट २..32. like जस्तो स्थिर प्रोग्राम खोज्नको लागि कत्ति महत्त्वपूर्ण थियो जुन ती सबै विस्तारहरू र नियन्त्रण प्यानलहरूको साथ मेरो मेशिन क्र्यास हुँदैन। ओह, म प्रणाली .61.१ मा पनि टाँसिदै छु। मसँग सीडी-रोम, बाह्य हार्ड ड्राइभ, एक SyQuest हटाउन योग्य हार्ड ड्राइव, र फ्ल्याटबेड स्क्यानर मेरो म्याकमा हुक छ। - कुनै द्वन्द्व छैन! म यस उत्पादनको साथ अत्यन्तै खुशी छु र तपाईले मलाई उद्धृत गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाई चाहानुहुन्छ भने! आरटी टोरन्टो, ओन्टारियो, क्यानडा
म अष्ट्रेलियामा एक थाई विद्यार्थी हुँ। मँ तपाईको सफ्टवेयरको केहि समयको लागि प्रयोग गरिरहेको छु र मलाई यो साँच्चिकै मनपर्दछ। तपाईको कपिपास्ट एकदम उपयोगी छ र कुनै समस्या बिना राम्रोसँग काम गर्दछ। KE थाईलैंड
मैले प्रयोग गरेको धेरै हप्ताहरूमा प्रतिलिपिपास्ट मेरो लागि ठूलो सुविधा भएको छ। विशेष रूपमा, यो 'काममा आउँदछ जब म कानूनी उजूरीको जवाफ मस्यौदा गर्दछु (म एक वकिल हुँ), जसमा प्राय: धेरै वाक्य वा अनुच्छेदहरूको दोहरो प्रयोगको आवश्यकता हुन्छ। जेएफ मेन, संयुक्त राज्य अमेरिका
नमस्ते, म १ am बर्षको हुँ र म न्यूयोर्कमा बस्छु। मैले "copyPaste" सफ्टवेयर डाउनलोड गरें र म यो धेरै उपयोगी पाइरहेको छु। तपाईं सही हुनुहुन्छ ... किन एप्पलले यो सोचेनन्? आरपी, न्यूयोर्क शहर, न्यूयोर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
भर्खरै डाउनलोड गरिएको प्रतिलिपि अधिकार। कागजात अहिले सम्म पढिएको छैन, तर केहि मिनेटको प्रयोगको साथ मैले महसुस गरें कि यो लामो समय सम्म देख्ने सबैभन्दा चतुर विस्तार हो। चेकबुकमा पुग्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन र। २० मा पठाउन। शेयरवेयर को राशि को साथ मान्छे हरु ले र को भुक्तान छैन, कि हास्यास्पद लाग्न सक्छ - तर म तपाइँको सफ्टवेयर भर दौड को लागी राम्रो छु। WJ Novi, MI USA
द्रुत नोट तपाईंलाई थाहा दिन म तपाईंको उत्पादनसँग धेरै खुशी छु। कृपया मेरो चेक खोज्नुहोस् जुन यस हप्ता पछि आउँनेछ। JB
तपाइँको सही copyPaste आधारभूत प्रणाली सफ्टवेयरको अंश हुनुपर्छ। DM रिभरडेल GA USA
CopyPaste वास्तवमा एक महान उपयोगिता कार्यक्रम हो! MC Encino, CA USA
मेरो एक साथीले हालसालै मलाई तपाईंको कट, प्रतिलिपि, टाँस्ने कार्यक्रमको प्रतिलिपि दिए। यो मलाई मन पर्छ! मेरो केहि लेखनमा मैले बारम्बार वाक्यांश वा शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो द्रुत र सरल छ प्रतिलिपिPaste को बहु क्लिपबोर्डहरू र त्यसपछि रेकर्ड म्याक्रोहरूको प्रयोग गर्न। यो ती विचारहरु मध्ये एक हो कि तपाईलाई छक्क पर्दछ किन कसैले यसलाई चाँडै किन सोचेन। यो प्रत्येक कम्प्युटरमा मानक उपकरण हुनु पर्छ। Worth २० को मूल्य छ। संलग्न भएपछि तपाईंले मेरो चेक फेला पार्नुहुनेछ। BT मोबाइल, AL संयुक्त राज्य अमेरिका
अति उत्तम! म कार्यक्रमको बाँकी अंश प्राप्त गर्न अगाडि हेर्छु! जेएम कि लार्गो, FL संयुक्त राज्य अमेरिका
शेयरवेयरको * सर्वश्रेष्ठ * टुक्रा मैले भेट्टाएको छु। म यसको लागि तिर्न पनि इच्छुक छु !! धन्यवाद CC Concord, NH, संयुक्त राज्य अमेरिका
संलग्न मेरो check २० को लागि जाँच हो। यो एक धेरै राम्रो कार्यक्रम हो। तपाईको कार्यक्रम म्याकटोडे मासिक पत्रिकाको मार्च अंकमा अत्यधिक सिफारिश गरिएको थियो। सबै भन्दा उपयोगी कार्यक्रम को लागी धन्यवाद। TW ताम्पा, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका
यो मैले देखेको सबैभन्दा उत्तम मल्टि-क्लिप उपयोगिता हो। धन्यवाद डीएम ग्रेपभ्यू, WA USA
म १ 1986 sinceXNUMX देखि म्याक प्रयोग गर्दैछु। म एक दिनदेखि मलाई बहुविध प्रतिलिपि र टाँस्ने क्षमताहरू दिनको लागि खोज्दैछु। मैले सबै सेयरवेयर वा व्यावसायिक उत्पादनहरू प्रयोग गरें जुन उनीहरूसँग आएका थिए र ती किल्लाहरू (उनीहरू मेरो प्रणालीमा भएका अरू करोडौं एक्सटेन्सनहरूसँग द्वन्द्वमा छन्) वा प्रयोग गर्न गाह्रो छ (यो कमान्ड-सी जत्तिकै सजिलो हुनुपर्दछ। वा यो प्रयासको लायक छैन)। मैले एउटा मनपराएकोमा फेला पार्न सकेको छैन र मैले तपाईलाई भेट्टाए सम्म प्रयोग गर्ने थिएँ। अरू सबै असफल भएकोले मसँग यसबाट काम गर्ने धेरै आशा छैन, तर म कपीपाससँग साँच्चिकै खुशी छु। राम्रो प्रयास जारी राख्नुहोस्! DK ब्रोकपोर्ट, न्यूयोर्क अमेरिका
सफ्टवेयरको एक महान टुक्रा को लागी धन्यवाद! SF नेवार्क, डे संयुक्त राज्य अमेरिका
राम्रो उत्पादन! SW फाउंटेन उपत्यका, CA संयुक्त राज्य अमेरिका
यो धेरै टाढा र सबैभन्दा उपयोगी सेयरवेयर हो जुन मैले लामो समयमा लिइन। यसका लागि सेयरवेयर शुल्क पठाउँदा म अधिक खुशी छु। तपाईले यहाँ ठूलो काम गर्नुभयो। आरआर रिडले पार्क, पीए संयुक्त राज्य अमेरिका
P of को प्रतिलिपिस्टेस्ट-सर्वश्रेष्ठ सेयरवेयर उपयोगिता। यी शब्दहरू स्पष्ट रूपमा सत्य छन्। यो एक महान उपयोगिता हो र म यसलाई साँच्चिकै रमाउँछु। राम्रो काम गरीरह्नु!! VR भ्यानकुभर, बीसी क्यानाडा
मैले यसलाई डाउनलोड गरें, मैले प्रयास गरें, मलाई यो मनपरायो, त्यसैले यहाँ २० डलर छ। WL क्यानाडा
म तपाईंको कार्यक्रम संग खुसी छु। एएच अल्मोन्टे, ओन्टारियो क्यानडा
भर्खर के मैले वर्षौं खोजिरहेको छु! जीबी डेभिस, क्यालिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका
कपिपास्ट एक अद्भुत, कार्यात्मक, सानो उपकरण हो। धन्यवाद आरबी विनिपेग क्यानाडा
कपिपास्ट एकदम राम्रो छ म यसलाई विश्वास गर्न सक्दिन। प्रेम गर्नुहोस् कि यो कसरी सजिलो काम गर्दछ। Merci! जेआर क्यामरिलो, CA संयुक्त राज्य अमेरिका
मलाई प्रतिलिपि पेस्ट दर्ता गर्न खुशी छ। संलग्न गरिएको मेरो चेक हो। मैले तपाईंको उत्कृष्ट उत्पादनहरू जिफडाभिस नेट / म्याकबाट कम्प्युसर्भको माध्यमबाट डाउनलोड गरें। म कल्पना गर्न सक्दिन कि मैले विगत नौ बर्षको लागि म्याकको आनन्द उठाएको छु केवल एक क्लिपबोर्डमा सीमित। लामो कागजातको सेक्सनहरू बीच वा बहु कागजातहरू बीच बहु वस्तुहरू स्थानान्तरण गर्न धेरै निराशाजनक छ। CopyPaste एक वास्तविक उत्पादकता उपकरण हो। फेरि, म तपाईंलाई बधाई दिन्छु र राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद। GR
गत हप्ता एक साथीले मलाई कस्तो उपहार दिए! तपाईको कपिपास्टको लागि बधाई छ। यस प्रसिद्ध उपयोगिता लाई प्रोग्राम गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। JC क्युबेक क्यानाडा
प्रतिलिपि / टाँस्नुहोस्, सफ्टवेयरको एक राम्रो टुक्रा। LB Scottsdale AZ USA
जब म मेरो डेटाबेसमा डाउनलोडहरू सम्पादन गर्छु तब यसले मलाई धेरै समय बचत गर्दछ। GH Glendale, MS USA
कस्तो राम्रो उपयोगिता! MM
मेरो जीवन धेरै सजिलो बनाउन को लागी धन्यवाद। ($ २० मेलमा छ) एसएच
भूतपूर्व अतारी एसटीको रूपमा मसँग, वर्षको ओआरटीमा मसँग एक पावरम्याक थियो, प्रायः त्यहाँ केवल एक क्लिपबोर्ड छ भन्ने तथ्यलाई विलाप गर्दछ। कसरी एप्पल * त्यसो * गर्न सक्छ? मैले सोधें! त्यसैले कपिपास्टको लागि धन्यवाद। यो तपाईंलाई जानकारी गराउनको लागि हो कि मैले आज तपाईंलाई २० डलरको ट्राभलर चेक पठाएको छु, तपाईंलाई समर्थन गरिएको छ (गत सेप्टेम्बरको ग्रान्ड क्यानियन, स्मारक उपत्यका, येलोस्टोन, आदि) मा मेरो यात्रा छोडेको छ। कस्तो यात्रा!) डीएच बर्मिंघम, इ England्ल्यान्ड
अर्को दिन तपाईंको उत्कृष्ट कार्यक्रम छान्नुहोस्, र अब म यस बिना बाँच्न सक्दिन, म आज एउटा चेक काट्दै छु, आशा छ कि यो शुक्रवार सम्म यहाँबाट बाहिर आउनेछ। KT
मैले तपाईंलाई मेरो दर्ता शुल्क पठाएको छु र पासवर्ड-साँचो प्राप्त गर्न अगाडि बढिरहेको छु। मैले अमेरिका-अनलाइनमा कपपास्ट v2.5.4 भेट्टाए। यो केवल म खोजिरहेको छु। तपाईको कडा मेहनत को लागी धन्यवाद! LL बर्लिtonटन, आयोवा अमेरिका
मलाई कपिपास्ट मन पर्छ! CS सैन फ्रांसिस्को, क्यालिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका
महान कार्यक्रम जेबी मुनरो एमआई संयुक्त राज्य अमेरिका
राम्रो काम! DB Hillsboro OR USA
उत्कृष्ट !!!!!!!! AD शिकागो, IL संयुक्त राज्य अमेरिका
"प्रतिलिपिपास्ट प्रो पृष्ठभूमिमा बसिरहेको छ, प्रयोगको लागि पर्खिरहेको छ, विश्वासपूर्वक स collecting्कलन र भण्डार गरीएको जेसुकै तपाईंले प्रतिलिपि गरेको वा काटिएको जे होस्, आइटमहरू जहाँ चाहानु टाँस्न तयार छ। पावर सुविधाहरूको लामो सूचीको बावजुद, आधारभूतहरू तपाईंलाई सुरू गर्नका लागि पर्याप्त छन् र यो सेटअप गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ।
कसैले तपाईंको क्लिपबोर्डको लागि प्रतिलिपिपास्ट प्रो समय मेशीन भनिन्छ। जबकि यो समय मेशीन जस्तो देखिँदैन, यसले क्याप्चर गर्दछ र तपाईको म्याकमा प्रतिलिपि गर्न सक्ने धेरै चीज भण्डार गर्दछ र भविष्यमा कुनै पनि समय टाँस्नको लागि उपलब्ध गराउँदछ। "
- ज्याक डी मिलर, Mac360 १२/12/१ ((लिङ्क)
"तपाईसँग गर्न दोहोरिएको सम्पादनहरू गर्दा गतिमा सुधार आश्चर्यजनक छ। यो निश्चित रूपमा उर्जा प्रयोगकर्ताका लागि एक पावर टूल हो र of मध्ये5को गियरहेड रेटिंग प्राप्त गर्दछ। " - मार्क गिब्स, नेटवर्क वर्ल्ड //१//१ ((लिङ्क)
मेरो मनपर्ने म्याक सुविधाहरू मध्ये एक हेर्नुहोस्। यसलाई copyPaste Pro भनिन्छ। यो बहु क्लिपबोर्ड प्रबन्धक हो। यसको मतलव तपाईले काट्ने वा प्रतिलिपि गर्ने कुनै पनि पुस्तकालयमा भण्डारण हुन्छ त्यसैले यसलाई फेला पार्न र फेरि प्रतिलिपि नगरी पछि टाँस्न सकिन्छ। त्यो एक ठूलो समय बचतकर्ता हो। - तेरा थॉमस ओ ब्रायन, तेराटाल्क्स, //१//१ ((लिङ्क)
जब यो मेरो म्याकमा आउँदछ, तपाईंले सुन्नुहुने धेरैजसो प्रचारका लागि ब्याकअप र केही आवश्यक म्याक उपयोगिताहरू गर्नुपर्दछ; ती सानो उपकरणहरू जुन एप्पलले ओएस एक्समा निर्मित भन्दा अझ राम्रो गर्छ। यहाँ उत्तम मध्ये एक छ। यो तपाइँलाई अधिक कुशल, सटीक, र उत्पादक बनाउनेछ, जो बारी मा, तपाईं एक राम्रो व्यक्ति बनाउन हुनेछ। कपि पेस्ट। - ज्याक मिलर, Mac360 १/1/१ ((लिङ्क)
"यदि तपाईं आफ्नो म्याकको लागि मात्र एउटा उत्पादकता उपकरण पाउन सक्नुहुन्थ्यो भने कपिपास्ट प्रो छान्नुहोस्" - ज्याक मिलर, म्याक 360० / / १9 / १२ (लिङ्क)
"CopyPaste प्रो शायद सबैभन्दा उपयोगी उपकरण हो जुन तपाईंलाई कहिले पनि थाहा भएन तपाईंलाई आवश्यक छ। यसको अपरिहार्य सुविधाहरूले तपाईंको दिन-प्रतिदिनको कार्यको उत्पादकतालाई साँच्चिकै बृद्धि गर्दछ। - बेन हार्वेल, म्याक्लिफ 6/१//११ (लिङ्क)
म्यासिटी इटालियन ब्लग //१/११ - प्रतिलिपिपास्ट प्रो म्याकको लागि उत्तम क्लिपबोर्ड अनुप्रयोग।
AppStorm समीक्षा //7/११ - जेम्स कुल १० बाहिर १०
म्याकवर्ल्ड m चूहों जुन २०० 4
क्र्याग ग्रिनेल Cra/4/०3 द्वारा मकउजर बेलायत समीक्षा
VERDICT: copyPaste X द्रुत अपरिहार्य 4.5 माईस हुन्छ
हबस्टन क्रॉनिकल बब लेभिटस २/१/2/०। द्वारा
मकउजर सेयरवेयर उपयोगिता पुरस्कार लाई कापीपेस्ट
नोभेम्बर म्याक पत्रिका
MacWeek मा लेख कापीपेस्ट
म्याकोन्टस अक्षमता सेयरवेयर र फ्रीवेयर
Tidbit को समीक्षा कापीपेस्ट
सेयरवेयर जुनकीहरूले मतदान गरे कापीपेस्ट वर्षको सर्वश्रेष्ठ म्याकोन्टोश कार्यक्रम
म्याकोन्टोश समाचार नेटवर्क दिनको उत्पादन
म्याकडाईरेक्टरीबाट सर्वश्रेष्ठ खरीद गर्नुहोस्
म्याकनेट जर्नल समीक्षा
मेरो लागि, म्याक सेयरवेयर डाउनलोड बिनाको दिन एक दिन सूर्यको किरण बिना नै हो। यसैले मेरा दुई हार्ड ड्राइवहरू दुखद थोरै परित्याग गरिएका सुविधाहरूसँग अव्यवस्थित छन्।
मैले एक पटक तिनीहरूलाई माया गर्थे। मैले साँच्चै गरे। एक दिन को लागी। एक हप्ताका लागि। वा केहि घण्टा। र त्यसपछि, ठीक छ, म केवल सादा दुर्भाग्यपूर्ण साना चीजहरूको बारेमा बिर्सनुभयो। यति थोरै समय, यति धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू। यो कठिन संसार हो। र तथ्य यो हो कि तिनीहरू मध्ये धेरैले मैले गर्न चाहेको कुरा कहिल्यै गरेनन् - दिन प्रति दिन कार्यहरू गति दिनुहोस् र कम्प्युटि ofको दोहोरिने कष्ट।
स्क्रिप्ट सफ्टवेयर (अब बेर आश्चर्यजनक) को अद्भुत मान्छेहरूको सँधै प्यारा * प्रतिलिपिस्टेस्ट हो जुन एक मात्र उपयोगिताको लागि म सत्य रहिरहेछु। * प्रतिलिपिस्टेस्ट एक विस्तार हो जुन, जब निकालिएको हुन्छ, तपाईंलाई १०० क्लिपबोर्डहरू प्रदान गर्दछ जहाँ तपाईं आवश्यक बिट्स र कागजातहरूको टुक्रा, यूआरएलहरू चाहानुहुन्छ र तपाईंलाई चाहिने चीजहरू भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि प्रयोग गर्नुहोस्। म्याकमा काम गर्ने सम्पादकका लागि यो केवल heaven २१ अमेरिकी डलरको लागि स्वर्गको केही अलि हो।
तर यसको लागि मेरो शब्द नलिनुहोस्। सबै शेयरवेयर जस्तै तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई प्रयास गर्नुहोस् र यदि तपाईंले यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने, यो तपाईंको हार्ड ड्राइभको कुनामा कतै सुस्त हुन दिनुहोस् जबसम्म तपाई अत्यधिक बडबडाउँदैनन्, तपाईले सबै चीजहरू सफा गरिदिनुहुन्छ (जस्तो कि यो कहिले हुनेवाला छ।)
पिटर विल्सन, भ्याकूवर सन
"म एक पटकमा एक भन्दा बढी आईटमको प्रतिलिपि गर्न सक्षम नगरेकोमा म एप्पललाई सराप दिन्छु।" तर प्रशंसक उदार प्रोग्रामरहरूको हो। सेयरवेयर.क.मा, मैले एउटा अनुप्रयोग पत्ता लगाए जसले मेरा प्रतिलिपि गर्ने क्षमताहरू टेबल्डमा विस्तार गर्दछ। कपिपास्टको निफ्टी पाठ प्रसंस्करण उपकरणले तपाईंलाई केस, ट्याब, वा पाठ फाइलहरू, चित्रहरू, र ध्वनिहरू क्लिपबोर्डमा हाल्न अनुमति दिन्छ - फ्लोटिंग प्यालेटले कहाँ हो ट्र्याक गर्दछ। निएटर पनि क्लिप सive्ग्रह हो, जसले तपाईंको डेस्कटपमा प्रतिलिपि गरिएको वस्तुहरू फोल्डरमा खसाल्छ - अनलाइन अन्वेषकहरूका लागि अत्यन्त सुविधाजनक। ”
"तपाईले पाउनुहुनेछ कि प्रतिलिपिस्टे अचम्मै सानो छ र, मेरो मनपर्ने शेयरवेयर उपयोगिताहरू जस्तै यो पनि लजालु व्यक्तित्व हो - तपाई यसलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र सावधानीपूर्वक तपाईको बेक र कलमा फर्किनेछ।" - अधिक ...
"कुनै पनि प्रकारको लेखन गर्नेहरूको लागि, कपिपास्ट-एक्स एक अमूल्य उपकरण हो जुन सिक्न सजिलो छ, र एकचोटि तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने, यसमा बिना तपाईं कसरी पनी आउनुभयो भनेर अचम्म मान्नुहुनेछ। M.उन्न माईस मध्ये ”. "अधिक ...
"CopyPaste: पावर प्रयोगकर्ताहरू र Novices एक जस्तै को लागी एक Godsend"
न्यान्सी क्यारोल ग्रेभली, म्याक अवलोकनकर्ता
पिटर विल्सन, भ्याकूवर सन लेख
"Si vous voulez gérer totalement vos presse-papiers (les sauvegarder, लेस एडिएटर, लेस आयोजक बराबर), copyPaste est fait pour vous। De même, si vous voulez retre aidé à la saisie, sa fonctionnalité yType peut vous aider। Et vu la densité de possibilités, लगभग 30० $ माँगको माग छ नयाँ Semblent pas exagérés। "
एन्ज हेयुरेक्स, म्याक गेनेरेसन
"CopyPaste प्रो एक धेरै लचिलो अनुप्रयोग को एक उदाहरण हो किनभने, अन्य उत्पादकता अनुप्रयोगहरु को विपरीत, यो यति धेरै फरक उपयोगहरु छ। विकासकर्ताहरूले त्यस्ता आधारभूत कम्प्युटर प्रकार्यमा सुधार गरेका छन् र नतिजा प्रतिभाशाली छन्।
कपिपास्ट प्रो, विकासकर्ता प्लम अमेजि ,को विकासकर्ताले यसका अन्य कार्यक्रमहरूमा यो प्रदर्शन गर्दछ जस्तो देखिन्छ - साधारण प्रणाली प्रोग्रामहरू लिँदै र तिनीहरूलाई ओम्प र थप सुविधाहरूको पूर्ण पम्प गर्दै।
कपिपास्ट प्रोले वास्तवमै मलाई समय बचत गर्न मद्दत गरेको छ र यो प्रयोग गर्न पाउँदा खुसीको कुरा हो - सरल र सुविधा सम्पन्न। केही व्यक्तिले सोच्न सक्छन्, तथापि, कार्यक्रमको $ 30 को खुद्रा मूल्य केवल एक साधारण उपयोगितामा खर्च गर्न अलिक बढी हो तर तपाईले पत्ता लगाउनु हुन्छ कि एक पटक तपाईले यो पाउनु भएपछि, तपाईले यस बिना नै कसरी गर्नुभयो भनेर आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। "
"त्यहाँ त्यस्तो दिन छैन जुन म प्रतिलिपि टाँस्न प्रयोग गर्दिन। फेरि एक शानदार उपयोगिताका लागि धन्यबाद। " - रोबर्ट टावर्स
एक जर्मन उड़ा 10/27/14
म्याकवल्ड १ Nov नोभेम्बर २०१०
IUseThis १ Nov नोभेम्बर २०१०
CopyPaste Pro - मेरो एक आवश्यक अनुप्रयोगहरू
मार्सेल डुफ्रेस्ने, मे २ 28, २०२०
म्याकजीक पोडकास्ट सेप्टेम्बर2२०१२
अप्रिल २२, २०१ 22 - ट्री टुडे समीक्षा केरी डासन द्वारा
इतिहासमा प्रतिलिपि पेस्ट गर्नुहोस्
१ 1997 XNUMX from को प्रतिलिपिपास्टको बारेमा तारयुक्त लेख
ऐतिहासिक Macintosh रिपोजिटरी अभिलेखहरुमा प्रतिलिपिपोस्टमा लिंक गर्नुहोस्।
1998 बाट ZDNet सफ्टवेयर लाइब्रेरी
MacUser बाट पुरस्कार कोपी copyPaste